ဘုရားရှင်၏နှိမ့်ချတော်မူခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ပင်ဖြစ်သည်ဟု ပုပ်ဖရန်စစ် မြွက်ကြား
Dec 9, 2016 04:29:20 PM Content: ဘုရားရှင်၏နှိမ့်ချတော်မူခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ပင်ဖြစ်သည်ဟု ပုပ်ဖရန်စစ် မြွက်ကြား
မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ စိန်ဖရန်စစ်ဇေးဗီးယားကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ Dec 9, 2016 04:28:08 PM Content: မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ စိန်ဖရန်စစ်ဇေးဗီးယားကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ Your browser does not support the audio element.
မိုးကုတ်စက်ဝန်းကိုချဲ့ ထွင်နိုင်ရန်အတွက် အာဒ်ဝင်ကာလက ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား Dec 9, 2016 04:26:51 PM Content: မိုးကုတ်စက်ဝန်းကိုချဲ့ ထွင်နိုင်ရန်အတွက် အာဒ်ဝင်ကာလက ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား Your browser does not support the audio element.
Dec 9, 2016 04:25:41 PM Content: သနားကြင်နာခြင်းဂျူဗလီနှစ်ပိတ်ပွဲအတွက်ကြိုးပမ်းဆက်ကပ်သူများအား ပုပ်ဖရန်စစ်ကျေးဇူးတင်ခြင်း
ဂရုဏာမြန်မာ မှကြီးမှုးကာ ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကျင်းပ
Dec 9, 2016 04:24:12 PM Content: ဂရုဏာမြန်မာ မှကြီးမှုးကာ ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကျင်းပ
မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော်ကာသီဒြယ်၌ ယေဇူးဘုရင်ပွဲနှင့်အတူ ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကျင်းပ
Dec 9, 2016 04:22:55 PM Content: မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော်ကာသီဒြယ်၌ ယေဇူးဘုရင်ပွဲနှင့်အတူ ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကျင်းပ
မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာတွင် ခရစ်တော်အတွက် ဇနီးမောင်နှံများ အသင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
Dec 9, 2016 04:21:44 PM Content: မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာတွင် ခရစ်တော်အတွက် ဇနီးမောင်နှံများ အသင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့်ဆိုင်သော ဘာဆီးလီးကားကျောင်းတော်ကြီး ၃ ကျောင်းမှ သန့် ရှင်းသော တံခါးတော်များ ပိတ်လိုက်ပြီဆိုခြင်း Nov 16, 2016 01:02:45 PM Content: ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့်ဆိုင်သော ဘာဆီးလီးကားကျောင်းတော်ကြီး ၃ ကျောင်းမှ သန့် ရှင်းသော တံခါးတော်များ ပိတ်လိုက်ပြီဆိုခြင်း Your browser does not support the audio element.
ဗာတီကန်အတွက်၂၀၁၆ ခရစ္ဆမတ် သူငယ်တော်အိမ်နှင့် ခရစ္ဆမတ်သစ်ပင်ရောက်ရှိလာတော့မည်
Nov 16, 2016 01:02:06 PM Content: ဗာတီကန်အတွက်၂၀၁၆ ခရစ္ဆမတ် သူငယ်တော်အိမ်နှင့် ခရစ္ဆမတ်သစ်ပင်ရောက်ရှိလာတော့မည်
အာရှနည်း အာရှဟန်ဖြင့် စုံလင်ပြည့်ဝသော သာသနာပြုခြင်းစနစ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ မန္တလေးသာသနာတွင် ကျင်းပ
Nov 16, 2016 01:01:19 PM Content: အာရှနည်း အာရှဟန်ဖြင့် စုံလင်ပြည့်ဝသော သာသနာပြုခြင်းစနစ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ မန္တလေးသာသနာတွင် ကျင်းပ
သေလွန်သောဝိညာဉ်များအတွက် ဆုတောင်းအပ်သောနေ့ တွင် သဂြိုင်းတွင်း၌ ပုပ်ဖရန်စစ် မစ္ဆား တရားပူဇော်ကာဆုတောင်းပေးခြင်း
Nov 16, 2016 12:59:45 PM Content: သေလွန်သောဝိညာဉ်များအတွက် ဆုတောင်းအပ်သောနေ့ တွင် သဂြိုင်းတွင်း၌ ပုပ်ဖရန်စစ် မစ္ဆား တရားပူဇော်ကာဆုတောင်းပေးခြင်း
ဟိန္ဒူများ၏ ဒေ၀ါလီပွဲတော်အတွက် ဗာတီကန်မှ နုတ်ခွန်းဆက်သတင်းစကားပေးပို့ ခြင်း
Oct 26, 2016 03:28:15 PM Content: ဟိန္ဒူများ၏ ဒေ၀ါလီပွဲတော်အတွက် ဗာတီကန်မှ နုတ်ခွန်းဆက်သတင်းစကားပေးပို့ ခြင်း
ခရစ်ယာန်နှင့် ဟိန္ဒူများ မိသားစုအတွင်း၌ မျှော်လင့်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးသူများဟူသည် ဆောင်ပုဒ်ဖြင့်၊ ဘာသာတရားအချင်းချင်း နှီးနှောဖလှယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရုံးတော်ကောင်စီ၏ ဥက္ကဌ ကာဒီနယ်ဂျင်းလူးဝှစ် တောင်ရဲန်သည် ဟိန္ဒူများ၏ ဒေ၀ါလီပွဲတော်အတွက် ဗာတီကန်မှ နုတ်ခွန်းဆက် သတင်းစကားပေးပို့ ခဲ့ပါသည်။ လူ့ ဘောင်အဖွဲ့ အစည်းကြီးကျန်းမာစွာရပ်တည်နိုင်ဘို့ သည် မိသားစုအတွင်း ပေါင်းစည်းမှု မှဖြစ် ပေါ်လာပြီး၊ မိသားစု ဟူသည့်သဘောတရားသည် ၄င်း၏တန်ဖိုးနှင့် အရေးပါသည့် အရာအဖြစ် ဆက် နွယ်မှုတို့ တွင် အခြေခံထားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ထားကြပါတယ်ဟုဆိုကာ တာဝန်ခံ ဥက္ကဌ ကာဒီနယ်ကြီးက အခုလို ဆက်လက်ရေးသားခဲ့ကြောင်း လူကြီးမိဘတွေရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ အကျင့်ပုံစံ တွေအားဖြင့် လူသားပီသစွာ တာဝန်ယူတတ်မှုနဲ့ကောင်း မြတ်ခြင်းတွေကို ဒီမိသားစုကနေပဲ သား သမီးများက သင်ယူ ကာတန်ဖိုးထားကြကြောင်း
မိသားစုအခြေအနေများကြောင့် တခါတရံ ကျွန်ုပ်တို့ ရဲ့ လူငယ်သားသမီးတွေရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဝါဒ နဲ့အကောင်းမြင် ၀ါဒတွေလျော့ပါးသွားတတ်သည့်အတွက် အခက်အခဲများရှိနေချိန်မှာတောင်ကောင်း မြတ်ခြင်းနဲ့ အနာဂတ်ကိုထွေးပွေ့ နိုင်ဘို့ မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတဲ့ အာရုံကို တဖြေး ဖြေးခြင်း စိမ့်ဝင်သွား အောင်အဖွဲ့ အစည်းနှင့်အတူ မိဘများက လမ်းပြညွှန်ပေးရန် သည်အရေးကြီးကြောင်း ပုပ်ရဟန်း မင်းကြီးဖရန်စစ်ဟောကြားခဲ့သလို မိသားစုသည် မျှော်လင့်ခြင်း၏ အလုပ်ရုံပင်ဖြစ်ကြောင်း
အောက်တိုဘာ ၃၀ရက်နေ့ တွင်ကျင်းပမည့် မိတ်ဆွေတို့ ၏ ဒေဗာဘာလီ (ဒေ၀ါလီ) ပွဲတော်ကြီး အ တွက်ဘာသာတရားအချင်းချင်း နှီးနှောဖလှယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပုပ်ရဟန်း မင်းကြီး ရုံးတော်ကောင်စီ၏ ကိုယ်စားကျွန်ုပ်က အကောင်းဆုံးမေတ္တာပို့ ခြင်းနှင့်အတူ နုတ်ဆက် ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သော ဒေ၀ါလီပွဲတော်ကြီးအားဖြင့်၊ မိသားစုများ ဆုံ ဆည်းခြင်း နှင့် အတူ ပျော် ရွှင်ခြင်း၊ငြိမ်းချမ်းခြင်းစတဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများမိတ်ဆွေတို့ ၏ မိသား စုများနှင့် အဖွဲ့အစည်း များ အပေါ်သက်ရောက်ပါစေကြောင်း အထူးနုတ်ဆက်ပါတယ်ဟုဆိုကာ ဘာသာ တရား အချင်းချင်း နှီး နှောဖလှယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရုံးတော်ကောင်စီ၏ ဥက္ကဌ ကာဒီနယ် ဂျင်းလူး ၀ှစ်တောင်ရဲန် က ဟိန္ဒူများ၏ ဒေ၀ါလီပွဲတော်အတွက် ဗာတီကန်မှ နုတ်ခွန်းဆက် သတင်း စကား ပေး ပို့ခဲ့ပါ ကြောင်း ဗာတီကန်ရေဒီယိုသတင်းအရသိရှိရပါသည်။
ဂျုဗလီ ပိတ်ပွဲ၌ သန့် ရှင်းသော တံခါးတော်များအား ပိတ်ကြရန်အတွက်၊ ကာဒီနယ်များအား ပုပ်ဖရန်စစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း
Oct 20, 2016 05:55:32 PM Content: ဂျုဗလီ ပိတ်ပွဲ၌ သန့် ရှင်းသော တံခါးတော်များအား ပိတ်ကြရန်အတွက်၊ ကာဒီနယ်များအား ပုပ်ဖရန်စစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း
သနားကြင်နာခြင်းဂျူဗလီ နောက်ဆုံးပိတ်ပွဲ တွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့်ဆိုင်သော ဘာဆီးလီးကား ကျောင်းတော်ကြီး သုံးကျောင်းမှ သန့် ရှင်းသော တံခါးတော်များကို ပိတ်ကြရန် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်က ကာဒီနယ်ကြီးများအား တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပါသည်။ Cardinal Agostino Vallini, သည် စိန်ဂျွန်းလာထရန် ဘာဆီးလီးကား ကျောင်းတော်ကြီးတွင်၎င်း၊ Cardinal Santos Abril y Castelló သည် စိန်မေရီမေဂျာ ဘာဆီးလီးကားကျောင်းတော်ကြီးတွင် ၄င်း၊ Cardinal James Michael Harvey က စိန်ပေါလ် ဘာဆီးလီးကားကျောင်းတော်ကြီးတွင် ၄င်း၊ အသီးသီး တာဝန်ယူကာ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းတော်ကြီးများတွင်၊ နုိူဝင်ဘာလ ၁၃ ရက် နေ့ ၌ မစ္ဆားတရားတော်မြတ်နှင့်အတူ သန့် ရှင်းသော တံခါးတော်များကို ပိတ်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဗာတီကန်ရေဒီယို သတင်းအရ သိရှိရပါသည်။ Your browser does not support the audio element.
ဆွီဒင် ရှိ ကက်သလစ် အသင်းတော် စာရင်းဇယား ထွက်ရှိ
Oct 20, 2016 05:54:28 PM Content: ဆွီဒင် ရှိ ကက်သလစ် အသင်းတော် စာရင်းဇယား ထွက်ရှိ
ဆွီဒင် နိုင်ငံတွင် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်မှ နိူဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်သော ကက်သလစ် နှင့် လူသရဲန် အသင်းတော် ပြုပြင်ခြင်း နှစ် ၅၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ပွဲတော် သို့ပါဝင် တက်ရောက် မည်ဖြစ်သော ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ် အရှင်သူမြတ်၏ အလည်အပတ်ကြွရောက် ခြင်း အတွက်၊ ဆွီဒင် ရှိ အသင်းတော် ဗဟိုရုံးမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန် ခဲ့ သော စာရင်းဇယားနှင့် နွယ်ကာ ကက်သလစ်ဘာသာဝင် ဦးရေ စာရင်းဇယားကို ထုန်ပြန် ကြေငြာ လိုက် ပါသည်။ ဆွီဒင် သည် 449,964 km2 နှင့် လူဦးရေ 9,851,000 ရှိကာ၊ 113,000 မှာ ကက်သလစ် များဖြစ်ကြပြီး၊ နိုင်ငံ၏ ၁.၁၅% ခန့် သော လူဦးရေပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအပြင် သာသနာစီရင်စု ၄၅ စုရှိပြီး ဆရာတော်ကြီး ၂ ပါး၊ ရဟန်းဘုန်းတော်ကြီး ၁၄၁ ပါး၊ အမျိုးသားအမျိုးသမီး သူတော်စင် ၂၅၃ ပါး၊ ဓမ္မဆရာ ၄၁၉ ဦး နှင့် ရဟန်းဖြစ်ကျောင်းသားကိုရင် ၁၅ပါးတို့ ရှိကြကြောင်း
ဆွီဒင်တွင် ကက်သလစ် ပညာသင်ကြားရေး ဌာန ကျောင်း ၁၃ ကျောင်းရှိကာ၊ အသင်းတော်ပိုင်၊ ဂရုဏာရေး စင်တာများဖြစ်သည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မကျန်းမာသူများ၊ မသန်စွမ်းသူများအတွက် ဂေဟာ ၂ ခု ရှိနေသည်ဆိုခြင်းကို ဗာတီကန် သတင်းတိုက် Press Office သတင်းအရသိရှိရပါသည်။ Your browser does not support the audio element.
မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ ချမ်းသာကုန်း ကိုးရမယ်တော်ပွဲကျင်းပ
Oct 19, 2016 01:54:27 PM Content: မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ ချမ်းသာကုန်း ကိုးရမယ်တော်ပွဲကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံ ကက်သလစ်သာသနာ အသီးသီးမှ ရဟန်းတော်များ၏ မွမ်းမံသင်တန်း ချောင်းသာတွင်ကျင်းပ
Oct 19, 2016 01:53:32 PM Content: မြန်မာနိုင်ငံ ကက်သလစ်သာသနာ အသီးသီးမှ ရဟန်းတော်များ၏ မွမ်းမံသင်တန်း ချောင်းသာတွင်ကျင်းပ
Oct 19, 2016 01:52:19 PM Content: အာဗီအေမြန်မာဘာသာအစီအစဉ် ကြေငြာချက်
သာမန်လူဝတ်ကြောင်၊ မိသားစုနှင့် အသက်ဆိုင်ရာ သာသနာ့ခုံရုံးအဖွဲ့ အစည်း ၏ တာဝန်ခံ အဖြစ် ကာဒီနယ်အသစ် တစ်ပါးအား ပုပ်ဖရန်စစ် ခန့် အပ်ခြင်း
Oct 12, 2016 11:02:33 AM Content: သာမန်လူဝတ်ကြောင်၊ မိသားစုနှင့် အသက်ဆိုင်ရာ သာသနာ့ခုံရုံးအဖွဲ့ အစည်း ၏ တာဝန်ခံ အဖြစ် ကာဒီနယ်အသစ် တစ်ပါးအား ပုပ်ဖရန်စစ် ခန့် အပ်ခြင်း
အာရှဒေသဆရာတော်ကြီးများ၏ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော အစည်းအဝေးအကြောင်း စီဘီစီအမ် လူထုဆက်သွယ်ရေးမှ သတင်းပေးပို့ 
Oct 12, 2016 11:01:58 AM Content: အာရှဒေသဆရာတော်ကြီးများ၏ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော အစည်းအဝေးအကြောင်း စီဘီစီအမ် လူထုဆက်သွယ်ရေးမှ သတင်းပေးပို့ 
ပုပ်ဖရန်စစ်မှ ကာဒီနယ်ကြီးအသစ် ၁၇ ပါး ထပ်မံခန့် အပ်မည်
Oct 12, 2016 10:59:37 AM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်မှ ကာဒီနယ်ကြီးအသစ် ၁၇ ပါး ထပ်မံခန့် အပ်မည်
ပုပ်ဖရန်စစ်၏ အောက်တိုဘာလ အတွက်ဆုတောင်းရန် ထားရှိသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ သတင်းထောက် များအတွက် ဖြစ်သည်ဆိုခြင်း
Oct 5, 2016 09:53:58 PM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်၏ အောက်တိုဘာလ အတွက်ဆုတောင်းရန် ထားရှိသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ သတင်းထောက် များအတွက် ဖြစ်သည်ဆိုခြင်း
ငလျင်ဘေးဒဏ်သင့်ခဲ့သော အီတလီနိုင်ငံမှ မြို့ လေးသို့ ဆုတောင်းပေးရန် ရုတ်တရက် ပုပ်ဖရန် စစ်ကြွရောက် Oct 5, 2016 09:53:31 PM Content: ငလျင်ဘေးဒဏ်သင့်ခဲ့သော အီတလီနိုင်ငံမှ မြို့ လေးသို့ ဆုတောင်းပေးရန် ရုတ်တရက် ပုပ်ဖရန် စစ်ကြွရောက် Your browser does not support the audio element.
တနင်္ဂနွေနေ့ အန်ဂျေလူးမေတ္တာရွတ်ဆိုခြင်းတွင် Azerbaijan ကက်သလစ်များအား ပုပ်ဖရန်စစ် အား ပေးစကားမြွက်ကြားခြင်း Oct 4, 2016 06:55:32 PM Content: တနင်္ဂနွေနေ့ အန်ဂျေလူးမေတ္တာရွတ်ဆိုခြင်းတွင် Azerbaijan ကက်သလစ်များအား ပုပ်ဖရန်စစ် အား ပေးစကားမြွက်ကြားခြင်း
ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေနေ့ က ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်သည် ဆလေးရှင်းများ၏ ဗဟို ဘာ့ကူးရှိ အပြစ်မဲ့သန္ဒေယူသော မယ်တော်သခင်မ ဘုရားကျောင်း တော်တွင် မစ္ဆားတရား ဟော ကြားအပြီး၊ သေးငယ်သည့်ကက်သလစ်အဖွဲ့ အစည်းလေးဖြစ်သော Azerbaijan ကက်သလစ် များအား ၄င်းတို့ ၏ ယုံကြည်ခြင်းကို သက်သေခံမှုများအတွက် အန်ဂျေလူးမေတ္တာရွတ်ဆိုခြင်းမပြုခင်၊ အားပေးစကားမြွက်ကြားခဲ့ပါသည်။
အရှင်သူမြတ်ကဆိုသည်မှာ ယခုလိုသေးငယ်လှတဲ့ ကက်သလစ်အဖွဲ့ အစည်းငယ်လေးကို ကြွ ရောက် ရခြင်းကို တချို့ ကတော့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ အချိန်တွေ အလဟသ ဖြစ်တယ်လို့ထင်ခြင် ထင်ကြ မယ်၊ ဘာကြောင့် ကက်သလစ်ဦးရေ ၇၀၀ သာရှိတဲ့ နေရာလေးကို လည်ပတ်ဘို့ကီလိုမီ တာတွေ အများကြီးဖြတ်ကျော် အချိန်ကုန်ခံပြီးလာရသလဲလို့ ထင်ကောင်းထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်အချိန်တွေ မကုန်ပါဘူး။ အလဟသလည်းမဖြစ်ပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ် ဒီအဖွဲ့ အစည်းလေးဟာ မ တူညီမှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့ အထဲမှာ Azeri, Italian, Spanish စတဲ့ ဘာသာစကားအသီးသီးနဲ့ ပြောဆိုကြတယ်။ မတူညီမှုတွေရှိပေမဲ့ ဒါဟာ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ အသွင်ကိုဆောင်ပါတယ်။ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာ ကောင်း ကင်ကနေ အလွန်သေးငယ်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းလေးထံကို ဆင်းကြွတော်မူခဲ့တယ်။ ကြောက်ရွံ့စိုးရ်ိမ် မှု တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းလေးကို သခင်ခရစ်တော် ဆောင်ယူလာတဲ့ သတင်း ကောင်း ကို ကြေငြာဟောပြောသက်သေခံဘို့သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားက အင်အားသတ္တိတွေ ဆင်း ကြွ ကာပေးခဲ့တယ်။ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ အလင်းကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကြောက်ရွံ့ စိုးရိမ် မှု တွေနဲ့ ပြည့်ဝနေခဲ့တဲ့ ဂျေရုဇလင်ရဲ့ တံခါးတွေ ပွင့်ဟလာခဲ့တယ်ဟု ဆိုကာ အရှင်သူမြတ်သည် ၄င်းကြွလာခဲ့ခြင်းမှာ အလဟသ မဖြစ်၊ အချိန်ဖြုန်းခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကို ရှင်းပြကာ ဆက် လက်မြွက်ကြားခဲ့သည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ အချက်နှစ်ချက်ပဲလိုအပ်ပါတယ်။ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဆင်းကြွလာစဉ်က မယ်တော်ဟာ အဲ့ဒီအဖွဲ့ အစည်းလေးမှာ ရှိနေခဲ့တယ်။ ကျွုန်ပ်တို့ ရဲ့ မိခင်ကို မမေ့ကြဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သန့့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ အလင်းကျေးဇူး အင် အား သတ္တိ တွေနဲ့သူတို့ ရဲ့ နှလုံးသားထဲကို ဖြည့်စည်းခံခဲ့ရတဲ့ အဲ့ဒီအဖွဲ့ အစည်းငယ်လေးဟာ ညီရင်း အကို စိတ် ဓါတ်နဲ့အချင်း ချင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားသလို၊ သင်တို့ သည်လည်း ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ထား ကြပါ။ မ ကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ ၊ သတ္တိရှိရှိနဲ့ ရှေ့ ဆက်လျှောက်လှမ်းကြပါဟု ဆိုကာ အရှင်သူ မြတ် ပုပ်ဖ ရန် စစ်သည် ကက်သလစ်လူဦးရေ ၇၀၀ သာရှိသည့် Azerbaijan ကက်သလစ်များအား အား ပေးကာ မြွက်ကြား ခဲ့သည်ကို ဗာတီကန်ရေဒီယုိုမှ သတင်းရရှိပါသည်။ Your browser does not support the audio element.
Georgia ရှိကက်သလစ်များနှင့် ပုပ်ဖရန်စစ်မစ္ဆားတရားပူဇော်ကျင်းပ
Oct 3, 2016 06:20:53 PM Content: Georgia ရှိကက်သလစ်များနှင့် ပုပ်ဖရန်စစ်မစ္ဆားတရားပူဇော်ကျင်းပ
ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်သည် အာဂျင်တီးနားသို့ ဗီဒီယိုသတင်းစကားပေးပို့ ခြင်း
Oct 3, 2016 06:19:06 PM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်သည် အာဂျင်တီးနားသို့ ဗီဒီယိုသတင်းစကားပေးပို့ ခြင်း
Tbilisi မှကက်သလစ်ဂရုဏာရေးဆက်ကပ်အမှုတော်ဆောင်များနှင့်ပုပ်ဖရန်စစ်တွေ့ ဆုံ
Oct 3, 2016 06:18:41 PM Content: Tbilisi မှကက်သလစ်ဂရုဏာရေးဆက်ကပ်အမှုတော်ဆောင်များနှင့်ပုပ်ဖရန်စစ်တွေ့ ဆုံ
အမုန်းတရားကို အမုန်းတရားဖြင့် မတုန့် ပြန်ရန် ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Sep 29, 2016 05:12:21 PM Content: အမုန်းတရားကို အမုန်းတရားဖြင့် မတုန့် ပြန်ရန် ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ NCYC မှကြီးမှုးကာ အစည်းဝေးတစ်ခု ကျင်းပ
Sep 29, 2016 05:08:42 PM Content: မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ NCYC မှကြီးမှုးကာ အစည်းဝေးတစ်ခု ကျင်းပ
Sep 27, 2016 05:24:02 PM Content: မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ စိန်ဗင့်ဆင့်ဒီပေါလ်ပွဲကျင်းပ
SDB ရဟန်းတော် ၃ ပါး၏ ရဟန်းဝါတော် နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်ပြည့် ငွေစင်ဂျူဗလီ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
Sep 27, 2016 05:22:22 PM Content: SDB ရဟန်းတော် ၃ ပါး၏ ရဟန်းဝါတော် နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်ပြည့် ငွေစင်ဂျူဗလီ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
Sep 26, 2016 05:05:40 PM Content: အကြားအာရုံချွတ်ယွင်းသူများအား ပုပ်ဖရန်စစ်နုတ်ဆက်ခြင်း
“Hospital Sisters of Mercy,” နှင့်ပုပ်ဖရန်စစ်တွေ့ ဆုံခြင်း
Sep 26, 2016 05:05:16 PM Content: “Hospital Sisters of Mercy,” နှင့်ပုပ်ဖရန်စစ်တွေ့ ဆုံခြင်း
လူ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အမှန်တရားနှင့် လေးစားခြင်းတို့ ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း အီတလီအမျိုးသား သတင်းပညာရှင်များကောင်စီအားပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Sep 23, 2016 03:27:16 PM Content: လူ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အမှန်တရားနှင့် လေးစားခြင်းတို့ ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း အီတလီအမျိုးသား သတင်းပညာရှင်များကောင်စီအားပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့ က ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်သည် အီတလီအမျိုးသား သ တင်း ပညာရှင်များ ကောင်စီ နှင့်တွေ့ ဆုံခဲ့ရာ ၄င်းတို့ ၏ ကျွမ်းကျင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ လူ့ဂုဏ် သိက္ခာ အတွက် အမှန်တရားနှင့် လေးစားခြင်းတို့ ရှိရမည်မှာ အရေးကြီးသည့်အဓိက အချက်ဖြစ် ကြောင်း မြွက်ကြားခဲ့ပါသည်။
ဗာတီကန်အတွင်း ကလဲမင်တဲန်း ခန်းမကြီးတွင် သတင်းထောက်များနှင့်တွေ့ ဆုံခြင်း၌ လူ့အသိုင်း အ၀ိုင်းကို အလွန်လွှမ်းမိုးစေတဲ့ သတင်းထောက်ရယ်လို့ အနည်းငယ်သာရှိသေးကြောင်း သတင်း ထောက် များဟာ လူအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် အမှန်တော့ ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပထမ ဆုံးဖြစ်စဉ် သမိုင်းကို မှတ်တမ်းယူကြရသူများဖြစ်ကာ ၄င်းဖြစ်စဉ်ကို သတင်းအစီအစဉ်အဖြစ်တင်ဆက်ခြင်း၊ ဖြစ်စဉ်ကို အဓိပယ်ဖွင့်ဆိုကာ ပရိတ်သတ်ဆီသို့ မိတ်ဆက်အရောက်ပို့ ပေးခြင်းစသည့် တို့ပြုလုပ်ကြ ရသူများးဖြစ်ကြောင်း
အသစ်သော မီဒီယာ ပုံစံများဖြင့် အပြောင်းအလဲများကို ဆီလျော်အောင်ပြုပြင်ကာ ဆက်လက်လုပ် ဆောင်နေကြသည့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသတင်းထောက်အတတ်ပညာပင်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုကာ သတင်းထောက်လုပ်ငန်းအတွက် အရေးကြီးသည့် မှတ်သားဖွယ် အချက် ၃ ချက်ကို အကျယ် တ၀ံ့ အလေးပေးကာ မြွက်ကြားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ နေထိုင်နေတဲ့ လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကြီးတိုးတက်ဖွံ့ ဖြို့ ဘို့ ရန်အတွက် လူ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို လေး စားတန်ဖိုးထားခြင်း၊ အမှန်တရားကိုမြတ်နုိူးခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်ကို ရုပ်လုံး ပေါ် စေခြင်းစသည့် အချက် ၃ ချက်တို့ အား အရှင်သူမြတ်က အလေးပေးမြွက်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပထမအချက်ဖြစ်သည့် အမှန်တရားကို မြတ်နုိူးခြင်းဆိုရာမှာ အပြောအားဖြင့်မဟုတ်ပဲ မိမိတို့ ၏ အသက် မွေးလမ်းကြောင်း သတင်းထောက်လုပ်ငန်းတွင် လက်တွေ့ နေထိုင်ကျင့် သုံးသက် သေခံခြင်း ပင်ဖြစ် ကြောင်း၊ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခြင်း လို့ ပြောရာမှာ မတူကွဲပြားသည့် လူ့အသိုင်း အ၀ိုင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်နိုင်စေမယ့်အချက်ဟာ လည်း သတင်းထောက်များအတွက် အခြေ ခံကြတဲ့ အချက်၊ ထောင့်ချုပ်ကျောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟု ဆိုပါသည်။
တတိယအချက်ဖြစ်သော လူ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားခြင်း ဆိုသည့်အချက်တွင်၊ တာဝန်သိသော၊ တာဝန် ယူမှုရှိသော သတင်းထောက် ပညာရှင်ဖြစ်ရန်နှင့် မိမိအသုံးပြုသော စကားအားဖြင့်လည်း အ ကြမ်း ဖက်သမားများ၊ လူသတ်သမားများဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ သတင်းထောက်ပညာဟာ ဘယ်တော့မှ မိမိ လူထုကို နိုင်ငံတော်ကို ဖျက်ဆီးတဲ့ အဖျက်သမားတွေ မဖြစ်ရပါဘူး။ ဝေဖန်ခြင်းဟာ တရားဝင်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ မကောင်းမှုကိုလူသိရှင်ကြားရှုတ်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ် သို့ သော် တစ်ပါးသူကို သူ့ ဘ၀အတွက်စာနာမှုထားကာ လေးစားမှုရှိခြင်းတို့ ဖြင့် အမြဲတမ်းကိုင်တွယ်သည့် သတင်းသမားများဖြစ်ကြရပါမယ်ဟု ဆိုကာ အရှင်သူမြတ်ပုပ်ဖရန်စစ်သည် ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပ တေး နေ့ က ဗာတီကန်အတွင်း ကလဲမင်တဲန်း ခန်းမကြီးတွင် အီတလီအမျိုးသား သ တင်း ပညာရှင်များ ကောင်စီမှ သတင်းထောက်များနှင့်တွေ့ ဆုံခြင်း၌ မြွက်ကြားခဲ့သည်ကို ဗာတီကန်ရေဒီယိုမှ သတင်းရရှိပါသည်။ Your browser does not support the audio element.
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆုတောင်းရမည့်နေ့ အတွက် အာစီစီမြို့ သို့ ကြွရောက်မည့် ပုပ်ဖရန်စစ်၏ အစီအစဉ်
Sep 22, 2016 11:43:02 AM Content: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆုတောင်းရမည့်နေ့ အတွက် အာစီစီမြို့ သို့ ကြွရောက်မည့် ပုပ်ဖရန်စစ်၏ အစီအစဉ်
Sep 22, 2016 11:40:20 AM Content: သူတစ်ပါးအားစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုပဲ၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းထားရှိရန်ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
ဘုရားရှင်၏နာမ၌သတ်ဖြတ်ခြင်းသည်စာတန်နတ်ဆိုး၏အလုပ်ဖြစ်ကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား Sep 19, 2016 07:16:45 PM Content: ဘုရားရှင်၏နာမ၌သတ်ဖြတ်ခြင်းသည်စာတန်နတ်ဆိုး၏အလုပ်ဖြစ်ကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား Your browser does not support the audio element.
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆုတောင်းကြရန် ပုပ်ဖရန်စစ်တောင်းဆိုခြင်း
Sep 19, 2016 07:14:46 PM Content: ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆုတောင်းကြရန် ပုပ်ဖရန်စစ်တောင်းဆိုခြင်း
လစ်လျှူရှုခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိလုံလောက်နေပြီဟု ယူဆခြင်းများမှ ဘုရားရှင်ကယ်နုတ်ပေးပါမည့်အကြောင်း ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြားခြင်း
Sep 13, 2016 04:48:11 PM Content: လစ်လျှူရှုခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိလုံလောက်နေပြီဟု ယူဆခြင်းများမှ ဘုရားရှင်ကယ်နုတ်ပေးပါမည့်အကြောင်း ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြားခြင်း
Sep 12, 2016 08:05:13 PM Content: မန္တလေးမြို့စိန်ဇေးဗီးယားဘုရားကျောင်းတွင် ကျန်းမာခြင်းမယ်တော်ပွဲကျင်းပ
အပြစ်သားများကို ဘုရားရှင်သည် သနားကြင်နာတော်မူကြောင်းကို သခင်ခရစ်တော်ပြသခဲ့သည်ဟု ပုပ်ဖရန်စစ် မြွက်ကြားခြင်း
Sep 12, 2016 08:03:49 PM Content: အပြစ်သားများကို ဘုရားရှင်သည် သနားကြင်နာတော်မူကြောင်းကို သခင်ခရစ်တော်ပြသခဲ့သည်ဟု ပုပ်ဖရန်စစ် မြွက်ကြားခြင်း
ပုပ်ဖရန်စစ် မှ မာသာရ်ထရေဇားအား ရဟန္တာတင်မြှောက်ခြင်း Sep 7, 2016 01:51:08 PM Content: ပုပ်ဖရန်စစ် မှ မာသာရ်ထရေဇားအား ရဟန္တာတင်မြှောက်ခြင်း Your browser does not support the audio element.
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ၁၅၀၀ တို့ အား ပုပ်ဖရန်စစ်က ပီဇာ ဝေငှကျွေးမွေးခြင်း Sep 7, 2016 01:48:50 PM Content: ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ၁၅၀၀ တို့ အား ပုပ်ဖရန်စစ်က ပီဇာ ဝေငှကျွေးမွေးခြင်း သတင်း
စက်တင်ဘာလ ၄ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ကာလ်ကတ္တားမှ မာသာရ်ထရေဇား၏ ရဟန္တာတင်မြှောက်ခြင်း အခမ်းအနားအပြီးတွင်၊ အရှင်သူမြတ်ပုပ်ဖရန်စစ် သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ၁၅၀၀ တို့ အားဖိတ်ခေါ်ကာ ပီဇာဝေငှကျွေးမွေးခဲ့ပါသည်။
အထက်ပါဆင်းရဲသားတို့ မှာ၊ မာသာရ်ထရေဇား၏ ဂရုဏာရေးအသင်းဂိုဏ်းမှ ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက် ထားသော အလွန်နွမ်းပါးသူများဖြစ်ကာ ၄င်းတို့ အား Pope Paul VI ခန်းမဆောင်တွင် ပီဇာဝေငှကာ နေ့ လည်စာ ကျွေးမွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မာသာရ်ထရေဇား၏ ဂရုဏာရေးသီလရှင်များက ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ထားသည့် မြို့ ပေါ် ဘော်ဒါ ဆောင်များမှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့်အတူ အီတလီရှိ မြို့ တော်များဖြစ်ကြသော မီလန်၊ ဘိုလောဂ်နာ၊ ဖရောရင့်စ်၊ နေပယ် စသည့် မြို့ အသီးသီးမှ ဆင်းရဲသား ၁၅၀၀ တို့ သည် ရဟန္တာ တင်မြှောက်ခြင်း ပွဲတော် အခမ်းအနားတွင်ပါဝင်ရန်အတွက် တစ်ညတာခရီးပြုကာ ဘတ်စ်ကားများဖြင့် ရောက်ရှိ လာ ခဲ့ကြ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရဟန္တာတင်မြှောက်ခြင်းပွဲတော် မစ္တားကြီးအတွင်း၌ ၄င်းတို့ သည် အရှင် သူမြတ်နှင့် အနီးဆုံးရှိနေရာ အ၀ိုင်းတွင် ထိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ အထက်ပါ နေ့ လည်စာ ပီဇာဝေငှကျွေးမွေးခြင်းအစီအစဉ်ကို မာသာရ်ထရေဇား၏ သီလရှင် အပါး ၂၅၀နှင့် အတူ၊ အမျိုးသားသူတော်စင် ၅၀ ပါး နှင့် ဆက်ကပ်အမှုတော်ဆောင်များတို့ က ဝေငှ ပေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါ ပီဇာတို့ မှာ၊ Neapolitan pizzeria မှဖြစ်ကာ ၄င်းဆိုင်၏ ၀န်ထမ်း များက အိုးကြီး ၃ အိုးဖြင့် ယင်းပီဇာများကို စိန်ပီတာရင်ပြင်တော်သို့သယ် ဆောင် လာ ခဲ့ကြသည်ဆိုခြင်းကို ဗာတီကန် သတင်းတိုက် သတင်းအရ သိရှိရပါသည်။ Your browser does not support the audio element.
Sep 6, 2016 02:30:46 PM Content: စက်တင်ဘာလအတွက်ရဟန်းမင်းကြီး၏ဆုတောင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်
မာသာရ်ထရေဇား၏ ရဟန္တာတင်မြှောက်ခြင်းပွဲကို အန်ဂျေလူးမေတ္တာရွတ်ဆိုခြင့်းဖြင့် ပုပ်ဖရန်စစ် အဆုံး သတ်ခြင်း Sep 6, 2016 02:29:08 PM Content: မာသာရ်ထရေဇား၏ ရဟန္တာတင်မြှောက်ခြင်းပွဲကို အန်ဂျေလူးမေတ္တာရွတ်ဆိုခြင့်းဖြင့် ပုပ်ဖရန်စစ် အဆုံး သတ်ခြင်း Your browser does not support the audio element.
၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံအတွက် အထူးခြိုးခြံဆုတောင်းရမည့်နေ့နှိုးဆော်ခြင်း Aug 31, 2016 11:39:00 AM Content: ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံအတွက် အထူးခြိုးခြံဆုတောင်းရမည့်နေ့နှိုးဆော်ခြင်း Your browser does not support the audio element.
ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းအားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် အထူးဆုတောင်းအပ်သောနေ့ သတ်မှတ် Aug 30, 2016 08:21:18 PM Content: ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းအားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် အထူးဆုတောင်းအပ်သောနေ့ သတ်မှတ် Your browser does not support the audio element.
မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ ကျန်းမာရေးကော်မရှင် ဆေးကုသပေးမှုအစီအစဉ်
Aug 30, 2016 08:20:20 PM Content: မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ ကျန်းမာရေးကော်မရှင် ဆေးကုသပေးမှုအစီအစဉ်
အီတလီ ငလျင်ဘေးဒဏ်သင့်သူများအတွက် ဆုတောင်းပေးကြရန် ပုပ်ဖရန်စစ်တောင်းဆို
Aug 30, 2016 08:18:41 PM Content: အီတလီ ငလျင်ဘေးဒဏ်သင့်သူများအတွက် ဆုတောင်းပေးကြရန် ပုပ်ဖရန်စစ်တောင်းဆို
သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ က အီတလီ အလယ်ပိုင်းတွင် အင်အားကြီးမားသည့် မြေငလျင်ရိုက် ခတ်ခဲ့ မှု ကြောင့် ဒုက္ခကြုံတွေ့ နေကြရသူများအတွက် ဆုတောင်းပေးကြရန် စိန်ပီတာရင်ပြင်တော်တွင် စုရုံး ခဲ့ကြ သည့် ဘုရားဖူးများအား တနင်္ဂနွေနေ့ အန်ဂျေလူးမေတ္တာရွတ်ဆိုရာတွင် အရှင်သူမြတ် ပုပ်ဖ ရန်စစ်က တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
လူဦးရေ ၃၀၀ ၀န်းကျင်သေဆုံးကာ ၄၀၀ နီးပါး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး လူ၂၅၀၀ ခန့်အိုးအိမ်မဲ့ ဖြစ်နေကြ ရသည့် ဒုက္ခသည်များအတွက် ဆုတောင်းခြင်းအပြည့် အ၀ဖြင့် ၄င်းတို့ နှင့် အတူ၊ နီးကပ်စွာ ရှိနေပါ ကြောင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ပါက ၄င်းအနေနဲ့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်တွေ့ ဆုံလိုပါကြောင်း မြွက်ဆိုခဲ့ပါသည်။
ငလျင်ဒဏ်အပြင်းဆုံး ထိခဲ့သည့် မြို့ များဖြစ်သော Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto နှင့် Norcia မှဒုက္ခသည်များတို့ ၏ ဝေဒနာများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများတို့ ကို အသင်းတော်ကြီးက မျှဝေခံစား ကူညီပေးနိုင်ပါမည့်အကြောင်း
အာဏာပိုင်များ၊ ပြည်သူ့ ရဲများ၊ ဆက်ကပ်လုပ်ဆောင်ကြသော ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများ အား လုံးတို့ သည်လည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြသည်ဖြစ်ရကား၊ ဒုက္ခသည်များ၏ နာကြင်မှု ဝေဒနာ များသက်သာဖြေလျော့ စေရန်အတွက် တစ် လုံးတစ်ဝတည်း ရှိရန်လိုအပ်လှပါကြောင်း
ချစ်လှစွာသော ဒုက္ခသည် ညီအစ်ကိုမောင်နှမ သားသမီးများတို့ ၊ ယုံကြည်ခြင်းမှ ခွန်အားနှစ်သိမ့်မှုကို ကိုယ်တိုင်သယ်ဆောင်လာပေးပြီး၊ ဖခင်တစ်ဦးရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ပွေ့ ပိုက်မှု၊ အစ်ကိုတစ်ဦးရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ထွေးပိုက်မှုနဲ့ ခရစ်ယာန်တို့ ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းကို ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ဘို့ ၊ ဖြစ်နိုင်တာနဲ့သင်တို့ ဆီကို ကျွန်ုပ်လာဘို့ ဆန္ဒပြင်းပြလျက်ရှိနေပါတယ်ဟု အရှင်သူမြတ်က ဆိုပါသည်။
ထို့ နောက် စိန်ပီတာရင်ပြင်တော်ရှိ ဘုရားဖူးများအား၊ ငလျင်ဘေးဒဏ်သင့် ဒုက္ခသည်များ၊ သူတို့၏ မိသား စုများနှင့် အားလုံးအတွက် ဂုဏ်ကျေးဇူးတော် (အာဝေမာရီယား) မေတ္တာ ရွတ်ဆို ဆုတောင်း ကြ ရန် အရှင်သူမြတ်ကဖိတ်ခေါ်ကာ အတူတကွဆုတောင်းပေးခဲ့ကြသည်ဆိုခြင်းကို ဗာတီကန် ရေဒီယိုမှ သတင်းရရှိပါသည်။ Your browser does not support the audio element.
မယ်တော်သခင်မကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင်ဆောင်ခံရသောပွဲနေ့ တွင် ပုပ်ဖရန်စစ်သည်လူထုပရိတ်သတ်နှင့် အတူ အန်ဂျေလုးမေတ္တာဆို Aug 19, 2016 03:47:17 PM Content: မယ်တော်သခင်မကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင်ဆောင်ခံရသောပွဲနေ့ တွင် ပုပ်ဖရန်စစ်သည်လူထုပရိတ်သတ်နှင့် အတူ အန်ဂျေလုးမေတ္တာဆို Your browser does not support the audio element.
ချောင်းဦးမြို့၌ မယ်တော်သခင်မကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင်ဆောင်ခံရသော ပွဲနေ့ ကျင်းပ
Aug 19, 2016 03:46:01 PM Content: ချောင်းဦးမြို့၌ မယ်တော်သခင်မကောင်းကင်ဘုံသို့ ပင်ဆောင်ခံရသော ပွဲနေ့ ကျင်းပ
သနားကြင်နာခြင်းသည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းရှိခြင်းအတွက် လက်နက်ဖြစ်သည်ဟု ပုပ်ဖရန် စစ်မြွက်ကြား Aug 18, 2016 03:20:33 PM Content: သနားကြင်နာခြင်းသည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းရှိခြင်းအတွက် လက်နက်ဖြစ်သည်ဟု ပုပ်ဖရန် စစ်မြွက်ကြား Your browser does not support the audio element.
အသင်းတော်ကြီးသည် ဗျူရိုကရေစီအရာရှိများထက် နှလုံးသားအပြည့်ရှိသည့်သာသနာပြုများအား လိုအပ်သည်ဟု ပုပ်ဖရန်စစ် မြွက်ကြားခြင်း Aug 17, 2016 11:18:56 AM Content: အသင်းတော်ကြီးသည် ဗျူရိုကရေစီအရာရှိများထက် နှလုံးသားအပြည့်ရှိသည့်သာသနာပြုများအား လိုအပ်သည်ဟု ပုပ်ဖရန်စစ် မြွက်ကြားခြင်း ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ အန်ဂျေလူးမေတ္တာရွတ်ဆိုရာတွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်အရှင် သူမြတ်သည်၊ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရား၏ မီးလျှံအကြောင်းကို ဟောကြားခဲ့ရာတွင်၊ အသင်း တော်ကြီးသည်ဗျူရိုကရေစီအရာရှိများ ကို မဟုတ် နှလုံးသားအပြည့်ဖြင့် ဆက်ကပ်ကြသည့် သာသ နာပြုများ အားလိုအပ်သည်ဟုမြွက်ကြားခဲ့ပါသည်။
တောက်လောင်နေတဲ့ နှလုံးသားမီးလျှံမပါပဲ ရှင်သန်နေတဲ့အသင်းတော်ဟာ အေးတိအေးစက် သို့မ ဟုတ် မပူမအေးဖြစ်နေတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ မပူမအေး အသင်း တော် သာဖြစ် နေပါ မယ် ဟု ဆိုကာ ဘုရားဖူးပရိတ်သတ်များအား မိမိတို့ ကိုယ်စီ၏ အကျင့်ပုံစံများကို ထောက်ရှု စဉ်ခြင်ကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်။ အရှင်သူမြတ်၏ နှိုးဆော်မိန့် မြွက်စကားမှာ တနင်္ဂနွေနေ့ ၊ စိန်ပီတာ ရင်ပြင် တော် တွင် စုရုံးကြသော ဘုရားဖူးများအား မြွက်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေ့ က ကျမ်းစာ တော်မြတ်ကို ညွှန်းဆို၍ အရှင်သူမြတ်က ထောက်ရှုတရားပေးခဲ့သည်မှာ သန့်ရှင်းတော် ၀ိညာဉ် တော် သည် ၄င်း၏ မီးလျှံတော်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး၏ နှလုံးသားတိုင်းကို ထွန်းတောက်စေကာ ချစ်ခြင်း မေတ္တာထားတတ်သူများဖြစ်ဘို့ သခင်ခရစ်တော်က အလိုရှိကြောင်း၊ ဒီတောက်လောင်တဲ့ မီးလျှံဟာ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားကို အသစ်ပြုပြင်စေပြီး သန့် ရှင်းစင်ကြယ်စေတဲ့ တီထွင်နိုင် စွမ်း ရှိကြောင်း၊ ဒီမီး လျှံတော်ဟာ၊ လူသားအားလုံးတို့ ရဲ့ နက်နဲဖွယ်အားလုံးကို တောက် လောင် စေ တဲ့မီး၊ အားလုံးသော တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှု၊ အားလုံး သောအပြစ် တွေကို လောင် ကျွမ်းစေ တဲ့မီးဖြစ် ကာ ပြောင်းလဲ စေသော မီးလျှံလည်းဖြစ်ကြောင်း
သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ ကျွန်ုပ်တို့ အပြည့်အ၀ ဖွင့်ဟထားမယ်ဆိုရင်၊ သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သနားကြင်နာခြင်းအပြုအမူတွေကို ပြုဘို့ နဲ့ သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ သ တင်း ကောင်းကို ကြေငြာဘို့ ခွန်အားသတ္တိတွေကို ၀ိညာဉ်တော်က သွန်းလောင်း ပေး မှာဖြစ် ပါတယ်။ သို့ သော် မီးလျှံဟာ ကျွန်ုပ်တို့ ရဲ့ အတွင်းနှလုံးသား မှလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု လည်း အ ရှင် သူမြတ်က ဆိုပါသည်။ ဒုက္ခသည်တွေ၊ နက်နဲဖွယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ နေရသူ၊ လိုအပ်သူ၊ ဝေဒနာသည်အားလုံးတို့ ထံ အ ရောက်သွားနိုင်မဲ့ သာမာန်လူဝတ်ကြောင်ဘာသာဝင်တွေ၊ သစ္စာသုံးပါးခံ သူတော်စင်တွေ၊ ရဟန်း တော်တွေများစွာလိုအပ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ မိမိတို့ ရဲ့အသက်ကိုပင်စွန့် သည့်တိုင် သခင်ခရစ်တော်ရဲ့သတင်းကောင်းကို သစ္စာရှိ စွာကြေငြာဟောပြောနေကြတဲ့ ရဟန်းတော်များ၊ အမျိုးသားအမျိုးသမီးသူတော်စင်များ၊ သာမာန် ဘာသာ ၀င်လူဝတ်ကြောင်များအားလုံးဟာ ကျွန်ုပ်တို့ ရဲ့စံနူမူနာယူထိုက်သူများဖြစ်ကြပြီး သူတို့ရဲ့ သက်သေခံချက်တွေက ဘာပြောနေလည်းဆိုရင်၊ အသင်းတော်ကြီးဟာ ဗျူရိုကရေစီအရာရှိတွေ၊ ၀ီရိ ယ ရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ကိုလိုအပ်တာမဟုတ်ပဲ နှလုံးသားအပြည့်နဲ့ ဆက်ကပ်ကြမဲ့ သာသနာပြုတွေ၊ သခင် ခရစ်တော်ရဲ့ နှစ်သိမ့်ခြင်းစကားတွေကို လူသားတွေထံအရောက်သယ်ဆောင်ပေးနိုင်မဲ့ သာသ နာပြုတွေကို လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဟု ဆိုကာ ကျွန်ုပ်တို့ ရဲ့ နှလုံးသားဟာ သန့် ရှင်း သော ၀ိညာဉ်တော်ရဲ့ မီးလျှံကို လက်ခံယူနိုင်ကြမဲ့ နှလုံးသားတွေ ဖြစ်ကြရဲ့လားဆိုသည်ကို ထောက်ရှု စဉ်း စားကြရပါမယ် ဟု ဘုရားဖူးပရိတ်သတ်များအား အရှင်သူမြတ်က မြွက်ကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုနောက် အရှင်သူမြတ်သည် အန်ဂျေလူးမေတ္တာရွတ်ဆိုရင်း သန့် ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်မီးလျှံဖြင့် တောက် လောင်နေသောနွေးထွေးသည့် နှလုံးသားများရရှိရန် အမိမယ်တော်မှ တဆင့် ဆု တောင်း ကြ ပါစို့ ဟုဆိုကာအစဉ်အမြဲ သနားကြင်နာခြင်းထားကာ တစ်ပါး သူအ ပေါ်ခွင့် လွှတ် တတ် သူ များ ဖြစ်ဘို့ ကြိုးစားကြပါဟုလည်း အရှင်သူမြတ်ပုပ်ဖရန်စစ်က စိန်ပီတာရင်ပြင်တွင် စုရုံးကြသော ဘု ရား ဖူးပရိတ်သတ်များအား မြွက်ကြားခဲ့ပါကြောင်း ဗာတီကန်ရေဒီယိုမှ သတင်းရရှိပါသည်။ Your browser does not support the audio element.
ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်အချို့ နှင့် ဗာတီကန်၌ ပုပ်ဖရန်စစ် နေ့ လည်စာ အတူဘုန်းပေးခြင်းသတင်း
Aug 12, 2016 12:53:09 PM Content: ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်အချို့ နှင့် ဗာတီကန်၌ ပုပ်ဖရန်စစ် နေ့ လည်စာ အတူဘုန်းပေးခြင်းသတင်း
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာအတွင်းရှိဂိုဏ်ပေါင်းစုံသူတော်စင်များ၏ သနားကြင်နာခြင်းနှစ်ဆုတောင်းပွဲကျင်းပခြင်း Aug 11, 2016 11:56:19 PM Content: မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာအတွင်းရှိဂိုဏ်ပေါင်းစုံသူတော်စင်များ၏ သနားကြင်နာခြင်းနှစ်ဆုတောင်းပွဲကျင်းပခြင်း Your browser does not support the audio element.
ကျွန်ုပ်တို့ ထမြောက်ကြရန် ဘုရားရှင်ဆိုနေပြီဟု ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ ပရိတ်သတ်အား ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား ခြင်း Aug 11, 2016 03:59:36 PM Content: ကျွန်ုပ်တို့ ထမြောက်ကြရန် ဘုရားရှင်ဆိုနေပြီဟု ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ ပရိတ်သတ်အား ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား ခြင်း Your browser does not support the audio element.
ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့့အပြီးသေဆုံးခဲ့သည့် ရောမ မှ လူငယ်လေးအတွက် ပုပ်ဖရန်စစ်ဆု တောင်းပေးခြင်း Aug 10, 2016 08:39:07 PM Content: ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့့အပြီးသေဆုံးခဲ့သည့် ရောမ မှ လူငယ်လေးအတွက် ပုပ်ဖရန်စစ်ဆု တောင်းပေးခြင်း Your browser does not support the audio element.
ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏သြဂုတ်လအတွက် ဆုတောင်းရန်ထားရှိသော ရည်ရွယ်ချက်များ
Aug 8, 2016 09:55:14 AM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏သြဂုတ်လအတွက် ဆုတောင်းရန်ထားရှိသော ရည်ရွယ်ချက်များ
Aug 5, 2016 06:41:58 PM Content: မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှ ကိုရင် ၅ ပါး ဦးပဉ္ဖင်းသိက္ခာခံယူခြင်း
Aug 5, 2016 06:40:40 PM Content: မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှ ကိုရင် ၅ ပါး ဦးပဉ္ဖင်းသိက္ခာခံယူခြင်း
အတိတ်က အမှတ်ရစရာများနှင့် ခွန်အားသတ္တိတို့ ဖြင့် သင်တို့ သည် အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက် များ ဖြစ်မည်ဟု WYD ဆက်ကပ်သူများအား ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြားခြင်းသတင်း
Aug 4, 2016 05:20:03 PM Content: အတိတ်က အမှတ်ရစရာများနှင့် ခွန်အားသတ္တိတို့ ဖြင့် သင်တို့ သည် အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက် များ ဖြစ်မည်ဟု WYD ဆက်ကပ်သူများအား ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြားခြင်းသတင်း
ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ် ဂရုဏာရှင်ယေဇူး ဗိမာန်တော်သို့ ရောက်ရှိ
Aug 4, 2016 05:19:29 PM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ် ဂရုဏာရှင်ယေဇူး ဗိမာန်တော်သို့ ရောက်ရှိ
လာမည့် ၂၀၁၉ ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ ကို မနာမားတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ် ကြေငြာခြင်း သတင်း
Aug 1, 2016 11:41:38 PM Content: လာမည့် ၂၀၁၉ ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ ကို မနာမားတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ် ကြေငြာခြင်း သတင်း
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးသည် ခရက်ကောင်း ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ကြီးကျောင်းတိုက် လသာဆောင်မှ လူထုပရိတ်သတ်အားနုတ်ဆက်ခြင်း
Aug 1, 2016 11:41:03 PM Content: ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးသည် ခရက်ကောင်း ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ကြီးကျောင်းတိုက် လသာဆောင်မှ လူထုပရိတ်သတ်အားနုတ်ဆက်ခြင်း
ပိုလန်နိုင်ငံခရက်ကောင်းသီလရှင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနှင့် ဆေးရုံရှိ ကာဒီနယ်ကြီးတစ်ပါးတို့ ထံ ပုပ်ဖရန်စစ် အလည်အပတ်ကြွရောက်ခြင်းသတင်း Aug 1, 2016 11:38:07 PM Content: ပိုလန်နိုင်ငံခရက်ကောင်းသီလရှင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနှင့် ဆေးရုံရှိ ကာဒီနယ်ကြီးတစ်ပါးတို့ ထံ ပုပ်ဖရန်စစ် အလည်အပတ်ကြွရောက်ခြင်းသတင်း Your browser does not support the audio element.
တံတားများတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် သနားကြင်နာခြင်းပြသကြပါဟု ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ဘုရားဖူးများ အား ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြားခြင်းသတင်း
Aug 1, 2016 11:37:27 PM Content: တံတားများတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် သနားကြင်နာခြင်းပြသကြပါဟု ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ဘုရားဖူးများ အား ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြားခြင်းသတင်း
ပိုလန်နိုင်ငံ ခရက်ကောင်းသို့ ပုပ်ဖရန်စစ်ရောက်ရှိခြင်းသတင်း
Jul 28, 2016 05:50:38 PM Content: ပိုလန်နိုင်ငံ ခရက်ကောင်းသို့ ပုပ်ဖရန်စစ်ရောက်ရှိခြင်းသတင်း
၁၅ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံရပ်ခြား တမန်တော်ကြီးခရီးစဉ်အဖြစ် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ် အရှင်သူမြတ် သည် ပိုလန်နိုင်ငံ ခရက်ကောင်းမြို့ တော်သို့ဂျူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့ ကရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ Alitalia Airbus A321 လေယာဉ်ဖြင့် စီးနင်းလိုက်ပါလာခဲ့၍ လေယာဉ်ပေါ်တွင် အရှင်သူမြတ်နှင့် အတူ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရုံးတော်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်တော်များနှင့် သတင်းတိုက်အသီးသီးမှ စာနယ် ဇင်းသမား ၇၀ ဦးတို့ပါဝင်လိုက်ပါလာခဲ့ကြကြောင်း
အရှင်သူမြတ်သည် ပိုလန်ကမ္ဘာ့လူငယ်များပွဲနေ့ အတွက် ၅ ရက်တာမျှ နေထိုင်သတင်း သုံး မည်ဖြစ် ကာ ဂျူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ တွင် ဗာတီကန်သို့ပြန်လည် ထွက်ကြွ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်ပွဲများနှင့် အစာရေစာ ငတ်မွတ်ခြင်း၏ ရလာဒ်များဖြစ်သော နိုင်ငံပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်သူ ခိုလှုံရာရှာ ဒုက္ခသည်များကို ကူညီပေးကြရန် အတွက်ကိုလည်း ပိုလန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသည့် နေ့ လည်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် Wawel Castle တွင်တွေ့ ဆုံရာ၌ အရှင်သူမြတ်က တိုက်တွန်း အားပေး ကာမြွက်ကြား ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ ဆုံအပြီး အနီးနားရှိ ဘာဆီးလီး ကား ကျောင်းတော်ကြီး၌ နိုင်ငံပိုင်ဆရာတော်ကြီးများနှင့်လည်းသီးသန့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ အထက်ပါ ဘာဆီးလီးကားကျောင်းတော်ကြီးတွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဒုတိယမြောက် စိန်ဂျွန်ပေါလ်သည်၎င်း ရဟန်းသိက္ခာခံယူအပြီး ပထမဆုံးမစ္ဆားတရားတော်မြတ်ကြီးကိုဟောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘာဆီးလီးကားကျောင်းတော်ကြီး၏တာဝန်ခံ ခရက်ကောင်းဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ကာဒီနယ် စတဲန်နစ္စလော့ ၏ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုခြင်းအပြီးတွင်တော့ အရှင်သူမြတ်သည် စိန်စတဲန်နစ္စလော့ ၏ အုတ်ဂူ နှင့် ပုပ်ဂျွန်ပေါလ်၏ ဓါတ်တော်မွေတော်ထားရှိရာဂူ၌ ခဏတာ တိတ်ဆိတ်ခြင်းဖြင့် ဆုတောင်း မေတ္တာပြုခဲ့ပြီး မိန်းဘုရားစင်အနောက်ဘက်ရှိ ဘုရား ဆောင်ငယ်လေး သို့ ကြွရောက်ကာ ခရက် ကောင်းမှ ဆရာတော်ကြီး အပါး၁၃၀ နှင့် သီးသန့် တွေ့ ဆုံပွဲမတိုင်ခင် ကိုယ် တော်မြတ်ဖူး မျှော်ကာ ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်.
ခရက်ကောင်းမှ ပြန်လည်ထွက်ကြွမသွားခင် ဆရာတော်ကြီးများအား တရားဝင်မ်ိန့် ခွန်းသြ၀ါဒ ပုံစံ ဟောကြားလ်ိမ့််မည်မဟုတ်ပဲ ဆရာတော်ကြီးနှင့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးတို့လွတ်လပ် စွာ ပြောဆို ဆွေး နွေးနိုင်သည့် တွေ့ ဆုံခြင်းမျိုးကို အရှင်သူမြတ်က လိုလားကြောင်း နှင့် ထိုနေရာတွင် တီဗီ သတင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ကိုလည်း ဗာတီကန်သတင်း တိုက်၏ ဒါရိုက် တာ ဖာ သာရ် ဖဲဒယ်ရိကို လုမ်ဘားဒီက ပြောကြားခဲ့ပါကြောင်း ဗာတီကန်ရေဒီယိုမှ သတင်းရရှိပါသည်။
Jul 28, 2016 05:49:36 PM Content: ကက်သလစ်ဓမ္မတေးသီချင်းဆို စတုတ္ထအဆင့်ပြိုင်ပွဲကျင်းပ
ခရက်ကောင်းကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ ကိုလွတ်မသွားစေမည့် အစီအစဉ်များ
Jul 28, 2016 05:48:36 PM Content: ခရက်ကောင်းကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ ကိုလွတ်မသွားစေမည့် အစီအစဉ်များ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ ကျဆုံးပြီးသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအတွက်ရည်စူးကာ ဘာသာပေါင်းစုံဆုတောင်းပြွဲ့ပုလုပ်ကျင်းပ
Jul 28, 2016 05:47:41 PM Content: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ ကျဆုံးပြီးသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအတွက်ရည်စူးကာ ဘာသာပေါင်းစုံဆုတောင်းပြွဲ့ပုလုပ်ကျင်းပ
ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ မတိုင်ခင် ပုပ်ဖရန်စစ်မှ ဗီဒီယိုသတင်းစကားပေးပို့ 
Jul 28, 2016 05:45:59 PM Content: ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ မတိုင်ခင် ပုပ်ဖရန်စစ်မှ ဗီဒီယိုသတင်းစကားပေးပို့ 
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဓမ္မတေးသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ တတိယအဆင့် ပထမအကြော့ပြိုင်ပွဲကျင်းပ
Jul 28, 2016 05:44:46 PM Content: မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဓမ္မတေးသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ တတိယအဆင့် ပထမအကြော့ပြိုင်ပွဲကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ မွန်ပြည်နယ်၏ အစ္စလာမ်ဘသာဝါကျွတ်အစ်ပွဲတော်အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ ကျင်းပ
Jul 28, 2016 05:43:18 PM Content: ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ မွန်ပြည်နယ်၏ အစ္စလာမ်ဘသာဝါကျွတ်အစ်ပွဲတော်အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ ကျင်းပ
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ နှင့် အစ် မိတ်ဆုံစားပွဲ ပုသိမ်တွင်ကျင်းပ
Jul 28, 2016 05:40:57 PM Content: အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ နှင့် အစ် မိတ်ဆုံစားပွဲ ပုသိမ်တွင်ကျင်းပ
ဆင်းရဲသူ၊ မကျန်းမာသူ၊ မသန်စွမ်းသူ အယောက် ၂၀၀ နှင့် ပုပ်ဖရန်စစ်တွေ့ ဆုံ
Jul 28, 2016 05:39:50 PM Content: ဆင်းရဲသူ၊ မကျန်းမာသူ၊ မသန်စွမ်းသူ အယောက် ၂၀၀ နှင့် ပုပ်ဖရန်စစ်တွေ့ ဆုံ
မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများ၏ ၆ လပတ်အစည်းအဝေးတင်ပြချက်များ
Jul 28, 2016 05:38:25 PM Content: မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများ၏ ၆ လပတ်အစည်းအဝေးတင်ပြချက်များ
ပိုလန်နိုင်ငံမှ ဆိုင်ကယ်စီးဘုရားဖူးအဖွဲ့ ရောမသို့ ရောက်ရှိခြင်း
Jul 28, 2016 05:36:46 PM Content: ပိုလန်နိုင်ငံမှ ဆိုင်ကယ်စီးဘုရားဖူးအဖွဲ့ ရောမသို့ ရောက်ရှိခြင်း
သနားကြင်နာခြင်း မဟာဂျူဗလီနှစ် ဘုရားဖူးဧည့်သည်တော်များနှင့် ပုပ်ဖရန်စစ်တွေ့ ဆုံ
Jul 28, 2016 05:35:24 PM Content: သနားကြင်နာခြင်း မဟာဂျူဗလီနှစ် ဘုရားဖူးဧည့်သည်တော်များနှင့် ပုပ်ဖရန်စစ်တွေ့ ဆုံ
အာရှတစ်ခုလုံးဆိုင်ရာ Signis အထွေထွေညီလာခံ
Jun 21, 2016 09:21:50 PM Content: အာရှတစ်ခုလုံးဆိုင်ရာ Signis အထွေထွေညီလာခံ
မြန်မာတစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကက်သလစ်လူထုဆက်သွယ်ရေးရုံးသည် ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သော သင် တန်းများ၊ အစည်း အဝေးများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အဆက်မပြတ်ကြိုးစားနေပါသည်။ တိုးတက် ပြောင်းလဲနေသော ယခုမျက်မှောက် ခေတ် တွင် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ကာဧဝံဂလိသတင်းကောင်းဝေမျှသက်သေခံရာ၌ မီဒီယာ ကွန်ရက်ကို ကောင်းမွန်ထိရောက်စွာဖြင့် အ သုံးပြုနိုင်စေရန်လည်းကြိုးစားနေပါသည်။ နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေး ကြီးများဖြစ် သော အာရှ တိုက်ရှိ ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများဆိုင်ရာ လူထုဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံ ဆရာတော်ကြီးများ၏ အထွေထွေ ညီလာခံကို ၂၀၁၅ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ အောင်မြင်စွာလက်ခံကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အာရှ တိုက်ရှိ ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများဆိုင်ရာ လူမှုဆက်သွယ်ရေးရုံး၏ အစိတ် အပိုင်း တစ်ခုဖြစ် သော Signis Asia Assembly 2016 အထွေထွေညီလာခံကို ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏ အားကစား ကွင်း ဘေး နားတွင်ရှိသော Myanmar Sport Hotel တွင် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၁)ရက် နေ့မှ(၂၆) ရက်နေ့အထိ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်ပါ သည်။
အာရှနိုင်ငံ(၂၁)နိုင်ငံတို့မှ ကက်သလစ်မီဒီယာ လုပ်ဆောင်နေကြသော ဆရာတော်ကြီးများ၊ ဘုန်း တော်ကြီးများ၊ ဘာသာတူ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ စုစုပေါင်း အယောက်(၇၀)ခန့်ပါဝင်ကြမည်ဖြစ်ကာ မြန် မာပြည် သာသနာအသီးသီးတွင် လူထုဆက် သွယ်ရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဘုန်း တော်ကြီး များလည်း ပါဝင်တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာမှ ကိုယ်စား လှယ်များသည် မြန်မာ ပြည်သို့လာရောက်ကာ မြန်မာတို့၏ယုံကြည်ခြင်းတွင် ခိုင်မာမှု၊ စည်းလုံးမှု၊ ရက်ရောမှုများတို့ကို မျက်ဝါး ထင်ထင် မြင်တွေ့ကြမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအထွေထွေညီလာခံနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ် ကျင်းပ နေ သည့်ပထမဦးဆုံးကက်သလစ် ဓမ္မတေးသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီး၏ နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲကိုလည်း တစ်ဆက် တည်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုညီလာခံတွင် မီဒီယာကို အသုံးပြု၍ ပညာပေး ဗီဒီယို၊ ရေဒီယို၊ ပို့စတာ နှင့် ဓါတ် ပုံပြိုင်ပွဲများ အတွက်လည်း ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲ၏ဆောင်ပုပ်မှာ ‘Merciful Action through Media’ မီဒီယာ အားဖြင့် ကြင်နာသနားခြင်းပြုလုပ်ခြင်း” ဖြစ်ပါသည်။
ဗီဒီယိုပြိုင်ပွဲကို တစ်မိနစ် နှင့် ငါးမိနစ် ဗီဒီယိုဟူ၍နှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်မိနစ်ဗီဒီယို အတွက်ပထမဆု တစ်ခု တည်းကိုသာ ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီးဆုတော်ငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဖြစ်ပါသည်။ ငါး မိနစ်ဗီဒီယို ကို လည်း ပထမဆု တစ်ခုတည်း ကိုသာရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီးဆုတော်ငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၅၀ ဖြစ် ပါ သည်။ (အင်္ဂလိပ်လိုစာသားထိုးပေးရပါမည်)
ရေဒီယိုပြိုင်ပွဲကို တစ်မိနစ် နှင့် ငါးမိနစ် ဗီဒီယိုဟူ၍နှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်မိနစ်ရေဒီယိုအတွက်ပထမဆု တစ်ခု တည်း ကိုသာ ရွေးချယ် မည်ဖြစ်ပြီးဆုတော်ငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဖြစ်ပါသည်။ ငါး မိနစ် ရေဒီ ယိုကိုလည်း ပထမဆု တစ်ခုတည်း ကိုသာရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီးဆုတော်ငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဖြစ်ပါသည်။(အင်္ဂလိပ်လိုပြောရပါမည်)
ပို့စတာနှင့် ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲများအတွက် ပထမဆုရ ရှိသူများများကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဆုချီးမြှင့်ပါမည်။ ဤပြိုင်ပွဲအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်သူ အ သက်(၂၅)အောက်လူငယ်ဖြစ်ရမည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်သော ဗီဒီယို၊ ရေဒီယို၊ ဓါတ်ပုံနှင့်ပို့စတာများကို အောက် ပါ လိပ်စာ အတိုင်း သြဂုတ်လ (၁၅)ရက်နေ့၊ ၂၀၁၆ မတိုင်မှီအရောက်ပို့ပေးရပါမည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ အထက်ပါ အာရှတစ်ခုလုံးဆိုင်ရာ Signis အထွေထွေညီလာခံကို အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် ကောင်း မွန်စွာလက်ခံကျင်းပနိုင်ရန်စေတနာရှင်များကဝိုင်းဝန်း ပါဝင်လှူဒါန်းပေးကြပါရန်လေးစားစွာဖြင့်နိုး ဆော် ရင်း မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်လျှက်
Fr. Leo Mang (SDB) , (CBCM-OSC Director)
၂၉၂(က)၊ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ဖုန်း၊ ၀၁ ၅၂၅ ၈၀၈ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၀၇၄ ၅၉၈
မှတ်ချက်။	။အယောက်(၇၀)အတွက် ထမင်းတစ်ရက်စာ ကုန်ကျငွေမှာ (၂၁)သိန်းကျပ်ဖြစ်ပါသည်။
ဗာတီကန်ရေဒီယို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အစီအစဉ်ဌာနမှုး မစ္စတာ ရှောင်းပက်ထရစ်လိုဗက် ၏ လူထုဆက်သွယ်ရေးသင်တန်း စီဘီစီအမ်၌ ကျင်းပ
Jun 21, 2016 09:20:55 PM Content: ဗာတီကန်ရေဒီယို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အစီအစဉ်ဌာနမှုး မစ္စတာ ရှောင်းပက်ထရစ်လိုဗက် ၏ လူထုဆက်သွယ်ရေးသင်တန်း စီဘီစီအမ်၌ ကျင်းပ
စီဘီစီအမ် လူထုဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်မှ အလျှူများကြိုဆို
Jun 21, 2016 09:18:22 PM Content: စီဘီစီအမ် လူထုဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်မှ အလျှူများကြိုဆို
ကာဒီနယ်ချားလ်စ်ဘို ဖိလစ်ပိုင်သို့ ကြွရောက်
Jun 21, 2016 09:17:01 PM Content: ကာဒီနယ်ချားလ်စ်ဘို ဖိလစ်ပိုင်သို့ ကြွရောက်
ပိုလန်နိုင်ငံကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ သို့ ပုပ်ဖရန်စစ်ကြွရောက်မည့် အစီအစဉ်များ
Jun 15, 2016 04:35:17 PM Content: ပိုလန်နိုင်ငံကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ သို့ ပုပ်ဖရန်စစ်ကြွရောက်မည့် အစီအစဉ်များ
ဂျူဗလီတွင်ပါဝင်ကျသော နာမကျန်းသူများနှင့် မသန်းမစွမ်းသူများတို့ အား ပုပ်ဖရန်စစ်ကျေးဇူး တင်ခြင်း Jun 15, 2016 03:34:16 PM Content: ဂျူဗလီတွင်ပါဝင်ကျသော နာမကျန်းသူများနှင့် မသန်းမစွမ်းသူများတို့ အား ပုပ်ဖရန်စစ်ကျေးဇူး တင်ခြင်း Your browser does not support the audio element.
Jun 13, 2016 04:22:20 PM Content: ရဟန်းတော်များ၏ဂျူဗလီကျင်းပခြင်း
ကျောက်ဆည်မြို့ နယ် သင်္ဂတုံကျေးရွာသို့မိုးသီးမုန်တိုင်းဒဏ်သင့်သူများအား ဂရုဏာလူမှုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအသင်းမှ သွားရောက်ကူညီ
Jun 8, 2016 04:55:12 PM Content: ကျောက်ဆည်မြို့ နယ် သင်္ဂတုံကျေးရွာသို့မိုးသီးမုန်တိုင်းဒဏ်သင့်သူများအား ဂရုဏာလူမှုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအသင်းမှ သွားရောက်ကူညီ
ဂရုဏာ မြန်မာ မန္တလေးရုံးမှ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်သူများအား သွားရောက်ကူညီ
Jun 8, 2016 04:54:40 PM Content: ဂရုဏာ မြန်မာ မန္တလေးရုံးမှ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်သူများအား သွားရောက်ကူညီ
သက်တော် ၁၀၀ ရှိ ကာဒီနယ် လောရင့်စ် ကာပိုဗီးလာ ပျံလွန်တော်မူခြင်း
Jun 8, 2016 04:51:51 PM Content: သက်တော် ၁၀၀ ရှိ ကာဒီနယ် လောရင့်စ် ကာပိုဗီးလာ ပျံလွန်တော်မူခြင်း
မန္တလေးသာသာနာ ကျန်းမာရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ မှ ရွှေဘိုမြို့နယ် ရွာတော်ကျေးရွာသို့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုသွားရောက်ပြုလုပ်ပေးခြင်း
Jun 8, 2016 04:50:47 PM Content: မန္တလေးသာသာနာ ကျန်းမာရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ မှ ရွှေဘိုမြို့နယ် ရွာတော်ကျေးရွာသို့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုသွားရောက်ပြုလုပ်ပေးခြင်း
ခရစ္စယာန်တို့ အားမှိုင်းမတော်မူသော ဘုရားကျောင်း စစ်ကိုင်းမြို့၌ ကျင်းပ
Jun 8, 2016 04:49:18 PM Content: ခရစ္စယာန်တို့ အားမှိုင်းမတော်မူသော ဘုရားကျောင်း စစ်ကိုင်းမြို့၌ ကျင်းပ
ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော လက်ဒီးကာ လူငယ်ညီလာခံသို့ ပုပ်ဖရန်စစ် နူုတ်ခွန်းဆက်စကားပေးပို့ 
Jun 8, 2016 04:48:16 PM Content: ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော လက်ဒီးကာ လူငယ်ညီလာခံသို့ ပုပ်ဖရန်စစ် နူုတ်ခွန်းဆက်စကားပေးပို့ 
အစေခံခြင်းကိုခံရန်မဟုတ်ပဲ အများကိုအစေခံရန်အတွက် ဖိတ်ခေါ်ခံရကြောင်း ဦးပဉ္ဖင်းကြီးများ အရှင်သူမြတ်မြွက်ကြား
Jun 8, 2016 04:47:00 PM Content: အစေခံခြင်းကိုခံရန်မဟုတ်ပဲ အများကိုအစေခံရန်အတွက် ဖိတ်ခေါ်ခံရကြောင်း ဦးပဉ္ဖင်းကြီးများ အရှင်သူမြတ်မြွက်ကြား
ခရစ္စယာန်တို့ အားမှိုင်းမတော်မူသောပွဲနှင့် ထာဝရ ရဟန်းသိက္ခာတင်ပွဲတော်ကျင်းပခြင်း
Jun 8, 2016 04:45:22 PM Content: ခရစ္စယာန်တို့ အားမှိုင်းမတော်မူသောပွဲနှင့် ထာဝရ ရဟန်းသိက္ခာတင်ပွဲတော်ကျင်းပခြင်း
အပတ်စဉ်လူထုပရိတ်သတ်နှင့်တွေ့ ဆုံရာတွင် အရှင်သူမြတ်သည် sign language ကိုအသုံးပြုခြင်း
Jun 8, 2016 04:44:10 PM Content: အပတ်စဉ်လူထုပရိတ်သတ်နှင့်တွေ့ ဆုံရာတွင် အရှင်သူမြတ်သည် sign language ကိုအသုံးပြုခြင်း
Jun 8, 2016 04:42:53 PM Content: လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးညီလာခံကျင်းပ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ သဘာဝဘေားအန္တရာယ်များနှင့် တောင်သူအခြေပြု၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေပွဲကျင်းပ
Jun 8, 2016 04:41:57 PM Content: သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ သဘာဝဘေားအန္တရာယ်များနှင့် တောင်သူအခြေပြု၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေပွဲကျင်းပ
Jun 8, 2016 04:40:13 PM Content: ချစ်ခြင်းမေတ္တာတည်နေသောနေရာ၌ ဘုရားရှင်တည်ရှိ
ဆင်းရဲသားတို့ အားမသိကျိုးကျွံပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်စက်ဆုတ် ရွံရှာသောအလုပ်ဖြစ်သည်
Jun 8, 2016 04:39:02 PM Content: ဆင်းရဲသားတို့ အားမသိကျိုးကျွံပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်စက်ဆုတ် ရွံရှာသောအလုပ်ဖြစ်သည်
ယူကရိန်းမှကလေးသူငယ်များနှင့် ပုပ်ဖရန်စစ်တွေ့ ဆုံ
Jun 8, 2016 04:37:03 PM Content: ယူကရိန်းမှကလေးသူငယ်များနှင့် ပုပ်ဖရန်စစ်တွေ့ ဆုံ
ဘုရားသခင်၏ကျိုးကြောင်းစဉ်ခြင်မှုသဘောသည် လူ၏သဘောနှင့်မတူကြောင်း အရှင်သူမြတ်မြွက်ကြား
Jun 8, 2016 04:35:24 PM Content: ဘုရားသခင်၏ကျိုးကြောင်းစဉ်ခြင်မှုသဘောသည် လူ၏သဘောနှင့်မတူကြောင်း အရှင်သူမြတ်မြွက်ကြား
ကမ္ဘာ့သာသနာပြုတနင်္ဂနွေနေ့ သည် နောက်လိုက် သာသနာပြုများဖြစ်ကြရန်အတွက် ပုပ်ဖရန်စစ် ဖိတ်ခေါ်
Jun 8, 2016 04:33:19 PM Content: ကမ္ဘာ့သာသနာပြုတနင်္ဂနွေနေ့ သည် နောက်လိုက် သာသနာပြုများဖြစ်ကြရန်အတွက် ပုပ်ဖရန်စစ် ဖိတ်ခေါ်
May 16, 2016 10:22:45 AM Content: Pentecost Sunday Homily
CHARLEMAGNE PRIZE May 12, 2016 11:19:34 AM Content: CHARLEMAGNE PRIZE Your browser does not support the audio element.
Mdy OSC Song
May 12, 2016 11:18:44 AM Content: Mdy OSC Song
A Legacy Of Archbp Gabriel Thohey
May 12, 2016 11:17:44 AM Content: A Legacy Of Archbp Gabriel Thohey
Archbp Gabriel Mahn-Gaby RIP
May 5, 2016 05:25:41 PM Content: Archbp Gabriel Mahn-Gaby RIP
May 5, 2016 05:24:44 PM Content: JESUS WORDS
May 3, 2016 11:20:17 AM Content: 6TH SUN OF EASTER
May 3, 2016 11:19:30 AM Content: GOOD SAMARITAN
CONFESSION FOR YOUTH
May 3, 2016 11:18:35 AM Content: CONFESSION FOR YOUTH
May 3, 2016 11:16:55 AM Content: LOVE
MLM Youth Camp
Apr 27, 2016 10:44:50 AM Content: MLM Youth Camp
Sin Apr 27, 2016 10:44:08 AM Content: Sin Your browser does not support the audio element.
Apr 27, 2016 10:43:21 AM Content: World Day Of Prayer For Vocations
5th Sun of Easter Homily
Apr 24, 2016 04:21:10 PM Content: 5th Sun of Easter Homily
Mdy Youth Camp (12)
Apr 24, 2016 04:20:01 PM Content: Mdy Youth Camp (12)
Apr 24, 2016 04:19:04 PM Content: RVA Meeting
NOT NUMBER BUT PERSONS
Apr 19, 2016 03:58:25 PM Content: NOT NUMBER BUT PERSONS
SAINTS Apr 19, 2016 03:57:27 PM Content: SAINTS Your browser does not support the audio element.
Apr 19, 2016 03:56:35 PM Content: THE JOY OF LOVE
ALMS GIVING Apr 19, 2016 03:55:47 PM Content: ALMS GIVING Your browser does not support the audio element.
Apr 19, 2016 03:54:52 PM Content: SUN ANGELUS
TO THE SAINTHOOD
Apr 19, 2016 03:54:02 PM Content: TO THE SAINTHOOD
4TH SUN OF EASTER HOMILY
Apr 19, 2016 03:53:14 PM Content: 4TH SUN OF EASTER HOMILY
3RD SUN OF EASTER HOMILY
Apr 19, 2016 03:52:15 PM Content: 3RD SUN OF EASTER HOMILY
Apr 5, 2016 06:27:36 PM Content: DIVINE MERCY SUNDAY
SECOND SUN OF EASTER
Apr 5, 2016 06:26:07 PM Content: SECOND SUN OF EASTER
Apr 5, 2016 06:25:10 PM Content: DIVINE MERCY PRAYER VIGIL
THE ROLL OF THE CHURCH IN NATIONAL BUILDING
Apr 5, 2016 06:23:30 PM Content: THE ROLL OF THE CHURCH IN NATIONAL BUILDING
RAV KAREN SERVICE
Apr 5, 2016 06:22:09 PM Content: RAV KAREN SERVICE
EASTER MESSAGE BY CARDINAL CHARLES BO
Apr 5, 2016 06:18:31 PM Content: EASTER MESSAGE BY CARDINAL CHARLES BO
Apr 5, 2016 06:11:21 PM Content: GOOD FRIDAY HOMILY
Apr 5, 2016 06:10:30 PM Content: GOOD FRIDAY VIA CRUCIS
MAUNDAY THURSDAY HOMILY
Apr 5, 2016 06:08:22 PM Content: MAUNDAY THURSDAY HOMILY
MDY HOLY CHILDHOOD
Apr 5, 2016 11:38:32 AM Content: MDY HOLY CHILDHOOD
Apr 5, 2016 11:37:22 AM Content: MASS OF THE LAST SUPPER
Apr 5, 2016 11:36:03 AM Content: CHRISM MASS
မန္တလေးမြို့ စိန်ဂျိုးဇက် လဖုန်း ပွဲတော်ကျင်းပခြင်း Mar 22, 2016 04:14:43 PM Content: မန္တလေးမြို့ စိန်ဂျိုးဇက် လဖုန်း ပွဲတော်ကျင်းပခြင်း Your browser does not support the audio element.
ပိုလန်နိုင်ငံခရက်ကောင်း ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ သို့ လူငယ်များစွာတို့တက်ရောက်မည်ဟု မျှော်လင့် ပါကြောင်း ပုပ်ဖရန်စစ် မြွက်ကြားခြင်း Mar 22, 2016 04:12:50 PM Content: ပိုလန်နိုင်ငံခရက်ကောင်း ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ သို့ လူငယ်များစွာတို့တက်ရောက်မည်ဟု မျှော်လင့် ပါကြောင်း ပုပ်ဖရန်စစ် မြွက်ကြားခြင်း Your browser does not support the audio element.
ဖရန်စ္စကူ့ စ်အမည်ဖြင့် အင်စတာဂရမ်အကောင့် မှာ နောက်လိုက် သန်းကျော် ရောက်ရှိ နေပြီ Mar 22, 2016 04:11:28 PM Content: ဖရန်စ္စကူ့ စ်အမည်ဖြင့် အင်စတာဂရမ်အကောင့် မှာ နောက်လိုက် သန်းကျော် ရောက်ရှိ နေပြီ Your browser does not support the audio element.
ဘုရားသခင်သည် သင်တို့ နှင့်အတူရှိကြောင်းသတိရရန် ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား Mar 22, 2016 02:33:13 PM Content: ဘုရားသခင်သည် သင်တို့ နှင့်အတူရှိကြောင်းသတိရရန် ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား Your browser does not support the audio element.
Mar 22, 2016 02:32:19 PM Content: ပိုလန်ခရီးစဉ်အသေးစိတ်အတွက် ပုပ်ဖရန်စစ်ပြင်ဆင်
Mar 22, 2016 02:31:51 PM Content: မြန်မာပြည်အတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာ
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းနင့်ဆိုင်သော ဆရာများဆုကို ပုပ်ဖရန်စစ်ကြေငြာ
Mar 22, 2016 02:31:23 PM Content: ကမ္ဘာတ၀ှမ်းနင့်ဆိုင်သော ဆရာများဆုကို ပုပ်ဖရန်စစ်ကြေငြာ
ဖရစ္စကူ့ ဟူသောအမည်ဖြင့် အင်စတာဂရမ်အကောင့် ပုပ်ဖရန်စစ်ဖွင့်လှစ်
Mar 22, 2016 02:30:56 PM Content: ဖရစ္စကူ့ ဟူသောအမည်ဖြင့် အင်စတာဂရမ်အကောင့် ပုပ်ဖရန်စစ်ဖွင့်လှစ်
Mar 22, 2016 02:29:32 PM Content: မာသာရ်ထရေဇားအား ရဟန္တာအဖြစ်တင်မြှောက်တော့မည်
နက်နဲဖွယ်ရာများထဲမှ သခင်ခရစ်တော်သည် သနားကြင်နာခြင်းကို သယ်ဆောင်လာပေးကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Mar 22, 2016 02:29:03 PM Content: နက်နဲဖွယ်ရာများထဲမှ သခင်ခရစ်တော်သည် သနားကြင်နာခြင်းကို သယ်ဆောင်လာပေးကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
စိန်ဂျိုးဇက်လဖုန်းအုပ်စု စိန်ဗင်းဆင့်ဒီပေါလ် အဖွဲ့ ဥပုသ်စောင့်
Mar 22, 2016 02:28:28 PM Content: စိန်ဂျိုးဇက်လဖုန်းအုပ်စု စိန်ဗင်းဆင့်ဒီပေါလ် အဖွဲ့ ဥပုသ်စောင့်
ဖိလစ်ပိုင်ရောက် မြန်မာကက်သလစ်မိသားစု ၏ ဥပုသ်စောင့်ခြင်း
Mar 22, 2016 02:27:07 PM Content: ဖိလစ်ပိုင်ရောက် မြန်မာကက်သလစ်မိသားစု ၏ ဥပုသ်စောင့်ခြင်း
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရုံးတော် အမှုဆောင်များတို့ ၏ ၀ိညာဉ်ရေးခရီးစဉ် ဥပုသ် သတင်းပတ် စတင်ခြင်း Mar 9, 2016 11:45:49 AM Content: ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရုံးတော် အမှုဆောင်များတို့ ၏ ၀ိညာဉ်ရေးခရီးစဉ် ဥပုသ် သတင်းပတ် စတင်ခြင်း Your browser does not support the audio element.
စိန်ပီတာဘာဆီလီးကားကျောင်းတော်ကြီး၌ ပုပ်ဖရန်စစ်သည် အာပတ်ဖြေခြင်းစက္ကရမင်တူးကို ဦးဆောင်ကျင်းပခြင်း Mar 9, 2016 11:44:46 AM Content: စိန်ပီတာဘာဆီလီးကားကျောင်းတော်ကြီး၌ ပုပ်ဖရန်စစ်သည် အာပတ်ဖြေခြင်းစက္ကရမင်တူးကို ဦးဆောင်ကျင်းပခြင်း Your browser does not support the audio element.
သနားကြင်နာခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်အားဖြင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မိမိကိုယ်ကိုယ် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြားခြင်:
Mar 9, 2016 11:43:58 AM Content: သနားကြင်နာခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်အားဖြင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မိမိကိုယ်ကိုယ် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြားခြင်:
ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ သန့် ရှင်းသော ရက်သတ္တပတ်နှင့် ပါစကားဝါကျွတ် ပွဲတော်အတွက် ၀တ်ပြုကိုးကွယ်မှုအစီအစဉ်များ
Mar 9, 2016 11:42:54 AM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ သန့် ရှင်းသော ရက်သတ္တပတ်နှင့် ပါစကားဝါကျွတ် ပွဲတော်အတွက် ၀တ်ပြုကိုးကွယ်မှုအစီအစဉ်များ
Mar 9, 2016 11:41:48 AM Content: မြင်းခြံမြို့ လုဒ်မယ်တော်ပွဲကျင်းပ
ပုပ်ဖရန်စစ်၏ မတ်လအတွက်ဆုတောင်းရန်ထားရှိသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ
Mar 1, 2016 02:04:09 PM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်၏ မတ်လအတွက်ဆုတောင်းရန်ထားရှိသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ
Feb 25, 2016 10:26:24 PM Content: သေဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုဖျက်သိမ်းရန်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအရှင်သူမြတ်မှ မေတ္တာရပ်ခံခြင်း
ခရစ်ယာန်များအားလုံးနှင့်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသူများအနေဖြင့်၊ သေဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုဖျက်သိမ်းရန်ကြိုးစာသကဲ့သို့ ၊ အကျဉ်းထောင်၏အခြေအနေကိုလည်းတိုးတက်လာအောင်တောင်းဆိုသင့်ကြောင်း၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၊ အကျဉ်းသားများ၏လူ့ တန်ဖိုးကိုလေးစားသင့်ကြောင်း၊ အစိုးရမင်းမျုားအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာသဘောတူညီမှုစာတမ်းများတွင်၊ သေဒဏ်စီရင်မှုကိုဖျက်သိမ်းခြင်း၌ သဘောတူညီပါဝင်သင့်ကြောင်း၊ သေဒဏ်စီရင်ချက်ကို သတ္တိရှိရှိ စံပြအဖြစ်၊ ယခုနှစ် ဘုရားသခင်၏ သနားကြင်နာခြင်းဂရုဏာနှစ်တွင်၊ ကက်သလစ်ဖြစ်သော နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များမှ ရပ်တန့် ပစ်လိုက်ကြရန်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် လူမှုအသင်းအဖွဲ့ အား တရားဝင် ကာကွယ်ပေးရာလည်းရောက်ကြောင်း၊ မျှော်လင့်ချက်၏ လင်းရောင်ခြည်လည်းဖြစ်ကြောင်း၊ လူမူအသင်းအဖွဲ့ အနေဖြင့် ပစ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အခြားသော နည်းလမ်းများစွာရှိကြောင်း၊ တရားမျှတခြင်းဟုဆိုသော်လည်း ဘုရားသခင်နှင့် လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ သဘောထားကိုလည်း နားစွန့် ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ဘုရားသခင်မှ ချမှတ်ထားသည့် လူ့ အသက်မသတ်ရ ပညတ်တော်သည်၊ အကြွင်းမဲ့တန်ဖိုး ရှိပြီး အဆိုပါပညတ်တော်သည်၊ ပစ်မှုကျူးလွန်သူနှင့် မကျူးလွန်သူ နှစ်ဦးစလုံးကိုကာကွယ်ပေးထားပြီး၊ ဘုရားသခင်ပေးထားသော အသက်၏ဆုကို အဘယ်သူမျှ ရုတ်သ်ိမ်းခွင့် မရှိကြောင်း၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်က စိန့် အီဂျီးတီအို အဖွဲ့ မှ ဦးစီး၍ ကျင်းပသည့် သေဒဏ်စီရင်ချက်ဖျက်သိမ်းရေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲနှင့် စပ်လျင်း၍ တနင်္ဂနွေနေ့အန်ဂျေလူးမေတ္တာမရွတ်ဆိုမှီ တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း Rome Report သတင်းအရသိရှိရပါသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့ အန်ဂျေလူးမေတ္တာရွတ်ဆိုရန်စုရုံးကြသည့် ဘုရားဖူးများနှင့် မက္ကဆီကို ခရီးစဉ်အကြောင်းကို ပုပ်ဖရန်စစ်ဝေငှခြင်းသတင်း
Feb 22, 2016 04:36:35 PM Content: တနင်္ဂနွေနေ့ အန်ဂျေလူးမေတ္တာရွတ်ဆိုရန်စုရုံးကြသည့် ဘုရားဖူးများနှင့် မက္ကဆီကို ခရီးစဉ်အကြောင်းကို ပုပ်ဖရန်စစ်ဝေငှခြင်းသတင်း
Feb 18, 2016 11:35:38 AM Content: ညောင်လေးပင်မယ်တော်ပွဲကျင်းပခြင်း
ဒုက္ခသည်တို့၏မျက်ရည်များအချည်းနှီးသက်သက် မဟုတ်ကြောင်း ဂွာဒါလုဒ်မယ်တော် ဘာဆီးလီးကားကျောင်းတော်ကြီး၌ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Feb 18, 2016 11:34:49 AM Content: ဒုက္ခသည်တို့၏မျက်ရည်များအချည်းနှီးသက်သက် မဟုတ်ကြောင်း ဂွာဒါလုဒ်မယ်တော် ဘာဆီးလီးကားကျောင်းတော်ကြီး၌ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Feb 18, 2016 11:32:31 AM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ် ၏မက္ကဆီကိုခရီးစဉ်
ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ် မက္ကဆီကိုသို့ ရောက်ရှိ
Feb 18, 2016 11:31:04 AM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ် မက္ကဆီကိုသို့ ရောက်ရှိ
သူတော်စင်များနှစ် ပိတ်ပွဲနှင့် သူတော်စင်များအတွက် သနားကြင်နာခြင်း ဂျူဗလီနှစ်ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပခြင်းသတင်း
Feb 4, 2016 02:40:55 PM Content: သူတော်စင်များနှစ် ပိတ်ပွဲနှင့် သူတော်စင်များအတွက် သနားကြင်နာခြင်း ဂျူဗလီနှစ်ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပခြင်းသတင်း
2.2.2016 ရက်နေ့ နံနက် (၉း၀၀ မှ ၃း၀၀)နာရီထိ မန္တလေးမြို့ 82-25 x 26ကြားရှိ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီ၏ဒြယ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် သူတော်စင်များနှစ် ပိတ်ပွဲနှင့် သူတော်စင်များအတွက် သနာကြင်နာခြင်း ဂျူဗလီနှစ် ဖွင့်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ပွဲတော်သို့ မန္တလေး ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ် သာသနာမှ ဆရာတော်ကြီး နီင်္ကောလာစ်းမန်ထန်း ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ကိုရင်များ သီလရှင်များနှင့် သီလရှင်လောင်းမျာ (၁၂၀)ပါး ကျော် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။ နံနက် (၉း၀၀)နာရီတွင် ဆရာတော်ကြီးနီကောလာစ်းမန်ထန်းမှ အဖွင့်စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဲဒီနောက်ခန်းမ ဆောင် တွင် သူတော်စင်များ နှစ်ပိတ်ခြင်းနှင့် သနားကြင်နာခြင်း ဂျူဗလီဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ခြင်း၊အဲဒီနောက်
Wake the World သီချင်းကို အားလုံးအတူတကွသီဆိုခြင်း၊ကချင်တိုင်းရင်းသူလေးများမှ ဘုရားသခင်ကိုဆက်ကပ် အပ်နှံ ထားသောသူတော်စင်များအားဂုဏ်ပြုအကဖြင့်ကပြဂုဏ်ပြုခြင်း၊အဲဒီ နောက်သူတော်စင်များ အချင်း သူတော် စင်များနှစ်အတွင်း ခံစား ခဲ့ရသည့် ကျေးဇူးများကိုအဖွဲ့လိုက် ဝေမျှခြင်း၊ အဲဒီနောက် ကိုယ်စီဆီမီးများ ကိုင်ဆောင်ကာ ဘုရားကျောင်းအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်း အစီစဉ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆီမီးများကိုင်ဆောင်ကာ ဘုရား ကျောင်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ဆီမီး ကိုသယ်ဆောင်ပြီးတော့ ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်နေရာကို သယ် ဆောင်သွားကြမှာလည်း၊လူအများကို ကူညီပြီးတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ နိုင်ငံကို ဦးတည် လျှောက် လှမ်း မယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကို နှလုံးသွင်းပြီး ဆီမီးကို ကိုင်ဆောင်ကာ ဘုရားကျောင်း ထဲသို့ဝင် ရောက်ကြ မှာဖြစ်တယ်ဟုဆလေးရှင်းသီလရှင်အသင်းဂိုဏ်းမှSr.ဖြူဖြူကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဲဒီနောက်မစ္ဆားတရားတွင်မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှဆရာတော်ကြီးနီကောလားစ် မန်ထန်းမှသြဝါဒ တရားရေအေးတိုက်ကျွေးရာတွင်သူတော်စင်တွေဟာမန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးအ များကြားမှာပေါ်လွင်အောင်လုပ်ဆောင်ကြလဲဆိုတာပြန်စဉ်းစားကြရ မယ့်အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ခရစ် တော် ရဲ့ဘဝကိုပုခုံးလွှဲဖို့တာဝန်အသီးသီးယူကြရမှာဖြစ်တယ် Religiousတွေဟာ၊ the light of the World ဖြစ်တယ်။ တစ်ခြားအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဘယ်နည်းနဲ့အလင်းကိုပြကြမှာလဲ။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာကတော့ရှိနေမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့်တိုင်း ရင်းသားများက တော်တော် လေ့လာဖို့လိုတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုကို လေးစားရမယ်။ ယဉ်ကျေးမှုကို မသိပဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ တစ်ဦးစီ တစ်ဦးစီက ထိထိရောက် ရောက်လုပ် ဆောင်ဖို့ စိန် ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ သြကာသလောကကြီးကို ဘာနဲ့ဖွဲ့စည်း ထားလဲ သိဖို့လိုတယ်။ မြေကြီးနဲ့ သခင်ယေဇူး ဘယ်လို ဆက်စပ် မှုရှိလဲ။မြေကြီးကိုလူတွေက ဖျက်စီးနေကြတယ်။ ရေကိုလူ တွေက အဆိပ်ခက် နေကြ တယ်။ လေထုကိုညစ်ညမ်း အောင်လုပ် နေကြတယ်။ Religious တွေကိုဒါကို ဘယ်လို တုန့်ပြန်ကြမလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းဂုဏ်တော်ကိုအမြဲ ဖော်ပြနေရမယ်။ Religious became the light of the Myanmar. ဒါကြောင့်ရေ၊ မြေ၊လေကို သနားပါဆိုပြီး သနား ကြင်နာခြင်းဂျူဗလီနှစ်မှာဘုရားသခင်ထံတောင်းလျှောက်ကြပါစို့ဟုမြွတ်ကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
Pinky (MDY OSC)2.2.2016
ရန်ကုန်ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်၌ ခရစ်ယာန်မိတ်သဟာအဖွဲ့ ကျင်းပ
Feb 4, 2016 02:38:38 PM Content: ရန်ကုန်ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်၌ ခရစ်ယာန်မိတ်သဟာအဖွဲ့ ကျင်းပ
ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီးပိတ်ပွဲသို့ ပုပ်ဖရန်စစ် ဗီဒီယို သတင်းစကားပေးပို့ ခြင်းနှင့် နောင်လေးနှစ်အတွက် IEC အိမ်ရှင်နိုင်ငံကို တရားဝင်ကြေငြာထုတ်ပြန်ခြင်းသတင်း
Feb 4, 2016 02:34:00 PM Content: ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီးပိတ်ပွဲသို့ ပုပ်ဖရန်စစ် ဗီဒီယို သတင်းစကားပေးပို့ ခြင်းနှင့် နောင်လေးနှစ်အတွက် IEC အိမ်ရှင်နိုင်ငံကို တရားဝင်ကြေငြာထုတ်ပြန်ခြင်းသတင်း
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆီဘူးမြို့ တော်တွင် ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ ရက်မှ ၃၁ ရက်နေ့ အထိကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံ တကာ ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီး International Eucharistic Congress ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား သို့ပုပ် ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်က ဗီဒီသတင်းစကား ပေးပို့ ခဲ့ပြီး နောင်လေး နှစ်အကြာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပမည့်နိုင်ငံတကာကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီးမှာဟန်ဂေရီနိုင်ငံတွင်ဖြစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကို လည်းအရှင်သူမြတ်က တရားဝင်ကြေငြာခဲ့ပါသည်။ ၄င်း၏ဗီဒီယိုသတင်းစကားတွင် အရှင်သူမြတ်ကမြွက် ဆိုသည်မှာ၊ ၄င်း၏ကိုယ်စား အထက်ပါပွဲ တော်ကြီးအားတာဝန်ယူပေးခဲ့သော ရန်ကုန်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာ တော်ကြီး ရဟန်းအမတ် ကာဒီနယ်ချားစ်ဘို၊ ဆီဘူးဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး၊ မနီလာ ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာ တော်ကြီး ကာဒီနယ်တာ့ဂလယ်နှင့် တာဝန် ရှိသူများအား၎င်း၊ တက်ညီ လက်ညီ ပါဝင် တက် ရောက် ခဲ့ကြ သည့် အာရှတခွင်မှ ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်များ၊ ကမ္ဘာ့အနှံ့ အပြားမှ ဘာသာဝင်အားလုံးကို နုတ်ခွန်း ဆက်ကာကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်ကျရောက်ခဲ့သော တိုက်ဖုန်းမုန် တိုင်း ရို လန်ဒါ အပြီး၊ ယမန်နှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် ၄င်း အနေနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်သို့တမန် တော်ကြီး ခရီး စဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့စဉ်က၊ ဖိလစ်ပိုင်ဘာသာဝင်တို့ ၏ အခက်အခဲကြားက ယုံကြည်ခြင်း ခိုင်မြဲပုံကို မိမိ ကိုယ်တိုင် တွေ့ မြင်ခဲ့ရကြောင်း၊ ယခုနှစ် ဆီဘူး တွင် ကျင်းပ သည့်နိုင်ငံတကာ ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲ တော်ကြီး၏ ဆောင်ပုဒ်သည် (Christ in You, Our Hope of Glory) ကျွုန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ခြင်း ဘုန်းဂုဏ်တော်၊ ခရစ်တော်ရှင်သည် ကျွုန်ုပ်၌ရှိသည် ဆိုသည်မှာလက်ရှိအချိန်နှင့် ကိုက်ညီ လျှက်ရှိကြောင်း၊ ကိုယ်တော်မြတ်စက္ကရမင်တူး၏ အသွေးတော်နှင့် အသား တော် အားဖြင့်၊ ရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူသော ခရစ်တော်ယေဇူးသခင်သည်၊ အသင်းတော်ကြီးနှင့် အတူ၊ ကျွုန်ုပ်တို့ နှင့်အတူ အစဉ်အမြဲတည်ရှိနေကြောင်း၊ သခင်ခရစ်တော်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူရှိ နေ သည်ဆိုခြင်းမှာ နှစ် သိမ့် ရန် ပင်မဟုတ်ပဲ တရား တော်နှင့်ကတိတော်လည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကတိ တော် ဆိုသည်မှာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် ပျော်ရွှင် ၀မ်းမြောက်ခြင်းတို့ရှိရာ ကောင်း ကင်နိုင် ငံတော် သည်ပြည့်စုံမည်၊ တရားတော် ဆိုခြင်း၌ သာသ နာပြုများ အနေဖြင့်ရှေ့ တိုးကာ၊ ဘုရားရှင်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ခွင့် လွှတ်ခြင်းနှင့် သနား ကြင် နာခြင်း တို့ ကို အမျိုး သား၊အမျိုးသမီး၊ ကလေး သူငယ်မကျန်အား ဖ ခမည်း တော်၏ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ တော်အတိုင်း သတင်း ကောင်းသယ်ဆောင် ဝေငှ ရန်ပင်ဖြစ် ကြောင်း အရှင် သူမြတ် ပုပ်ဖရန်စစ်က မြွက်ကြားကာ၊ ကိုယ် တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီးပိတ်ပွဲအပြီး ၀ိညာဉ် ခွန်အားအပြည့်ဖြင့် အိမ်ပြန်ကြမည့် သားသမီးများအား ၄င်း၏ အထူး ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ တော်ပေး အပ်ရင်း နောက်လေးနှစ် အကြာ၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ Budapest တွင် ကျင်းပပြု လုပ်မည့် ကိုယ် တော်မြတ ပွဲ တော်ကြီးအတွက်၊ ပြင်ဆင်မှုများအောင်မြင်စေပါမည့်အကြောင်း ဆုတောင်းပေးကြပါဟု အရှင်သူမြတ် ပုပ်ဖရန်စစ် ကမြွက်ကြား ခဲ့သည်ကိုဗာတီကန်ရေဒီယိုမှသတင်းရရှိ ပါသည်။ Your browser does not support the audio element.
Feb 4, 2016 02:30:58 PM Content: မန္တလေးသာသနာလုံးဆိုင်လူငယ်အားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပ
သခင်ခရစ်တော်၏ သာသနာပြုလုပ်ငန်း အသင်းတော်ကြီးသည် ဆင်းရဲသားများ အားသတင်း ကောင်း ကြေငြာ ရန်ဖြစ်ကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Feb 4, 2016 02:28:28 PM Content: သခင်ခရစ်တော်၏ သာသနာပြုလုပ်ငန်း အသင်းတော်ကြီးသည် ဆင်းရဲသားများ အားသတင်း ကောင်း ကြေငြာ ရန်ဖြစ်ကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီးအခမ်းအနားကို ကာဒီနယ်ကြီးချားစ်ဘို ဦးဆောင်ပူဇော်ကျင်းပ
Feb 4, 2016 02:27:05 PM Content: ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီးအခမ်းအနားကို ကာဒီနယ်ကြီးချားစ်ဘို ဦးဆောင်ပူဇော်ကျင်းပ
ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ကာဒီနယ်ကြီးချားစ်ဘို ဦးဆောင်ပူဇော်ကျင်းပခြင်းသတင်း
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆီဘူးမြို့ တော်တွင် ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ မှ ၃၁ နေ့ အထိ ကျင်းပလျှက်ရှိသော။ နိုင်ငံ တကာကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီး ကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ ကိုယ်စားလှယ်တော်အဖြစ် အထူးအပ်နှင်းခြင်းခံရပါသော၊ ရန်ကုန်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ကာဒီနယ်ချားစ်ဘို က ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ ၄ နာရီတွင် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကြီးကို ဦးဆောင်ပူဇော်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ Plaza Independencia တွင် ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ က ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သော ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော် ကြီးဖွင့်ပွဲတွင် မြွက်ကြားခဲ့သော ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ ကိုယ်စားလှယ်တော် ကာဒီနယ်ကြီး ချားစ်ဘို ၏ သြ၀ါဒ၌၊ “You areagreat nation. The light to Asia,” သင်တို့ သည် အာရှ တိုက်၏ အလင်းရောင်၊ ကြီးမားသည့် လူမျိုးစု ဖြစ်သည် ဟုဆိုကာ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများအား အာရှတိုက်တွင် အကျယ်ပြန့် ဆုံးနှင့် ကက်သလစ်လူဦးရေ အများ ဆုံးဖြစ်ခြင်း နိုင်ငံ တနိုင်ငံဖြစ် သည့် အတွက် ၄င်းက ချီးမွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအပြင် ဖိလစ်ပိုင်ရှိ မိမိတို့ ၏ မိသားစုများကို စွန့်ကာ နေရာအနှံ့အပြား၊ နိုင်ငံအတော်များများတွင်၊ ခြိုးခြံကာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေ ကြသည့် Oversea Filipino Workers, OFW များအားရည်ရွယ်၍၊ တချို့ နိုင်ငံတွေအတွက် ကက်သလစ်လို့ ပြောလိုက်ရင် ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေ ရှိတဲ့ နေရာ လား လို့တောင်ထင်နေကြတယ်ဟု ဟာသနှောကာ၊ ကာဒီနယ်ကြီးက ဖိလစ်ပိုင် လူမျိုးများ နေရာတိုင်းမှာရှိကြတယ် ဟု ဖိလစ်ပိုင်စကားဖြင့် (Nasa lahat ng dako ang dugong Filipino) လို့မြွက်ကြားခဲ့ရာ ၄င်းတို့ ၏ဘာသာစကားကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ ကိုယ် စား လှယ် တော် ကာဒီနယ်ကြီးဆီမှ ကြားခဲ့ရသည့်အတွက် ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများက ၀မ်းသာအားရစွာအားပါးတရ။ လက်ခုပ်တီး ဂုဏ်ပြု သြဘာပေးခဲ့ကြပါသည်။ ၄င်း၏သြ၀ါဒ တွင်ကာဒီနယ်ကြီးကမြွက်ကြားခဲ့သည်မှာ၊ ကိုယ်တော်မြတ်စက္ကရမင်တူး၌ သခင်ခရစ် တော်သည် လမ်းများပေါ်တွင် တရားဒေသနာဟောခဲ့ခြင်း၊ ဒုက္ခစရိယာခံခြင်းနှင့် အသက်တော်စွန့်ခဲ့ ကြောင်း ထို့ ကြောင့်၊ လမ်းများသည် ဘုရားစင်အဖြစ် အစေခံခြင်းဖြစ်ကာ၊ ဒီလမ်း ပေါ်မှာ ပင်ဘာ သာဝင်တို့ က သခင် ခရစ်တော်၏ ခြေရာတော်ကို လိုက်ကာ ၄င်း၏ သွန်သင်ခြင်းများကို လိုက်နာ ကျင့်ကြံနိုင်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း သခင်ခရစ်တော်သည် ၄င်း၏ခရစ္ဆတူးကို သယ်ဆောင်ရန်အတွက် နောက်လိုက် များဖြစ်ကြဘို့ဖိတ်ခေါ်နေကြောင်း၊ ယုံကြည်သူဘာသာဝင်တစ်ဦးရဲ့ မစ္ဆားတရား တော်ဟာ နာရီပိုင်း အတွင်း ပြီးဆုံး သွားသော်လည်း၊ နောက်လိုက် တစ်ဦး၏ မစ္ဆားတရား သည် ဘယ် သော အခါမျှ မဆုံး ကြောင်း ဖြင့်မြွက်ကြားခဲ့ပါသည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာ မိနစ် ၂၀ ခန့် မျှကြာ မြင့်သော မီးရှုး မီးပန်း များဖောက်ကာ ကိုယ်တော်မြတ် ပွဲတော်ကြီး စတင် လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကို အချက် ပေးလိုက်ပါတော့သည်။
၅၁ ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီးကို ဇန်န၀ါရီ ၂၄ ရက်မှ ၃၁ ရက်နေ့ အထိကျင်းပလျှက်ရှိပြီး ဆီဘူးမြို့ တော်နေရာအနှံ့ အပြားတွင် နာမည်ကြီးဝါရင့် ပညာရှင်များ၊ ဓမ္မသဂြိုလ်ပညာရှင်များတို့ ၏ ဟော ပြောမှုများနှင့်အတူ အစီအစဉ်များစွာ ဖြင့်ဆက်လက်ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပါကြောင်း IEC Website မှ ကိုးကား ကောက်နူတ်ပြီး ကျမစစ္စတာရ်လူစီယားသန္တာအောင်က သတင်းရယူထားပါတယ်ရှင်
နိုင်ငံတကာကုိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်အတွက်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ ကိုယ်စားလှယ်တော် ကာဒီနယ်ကြီးချားစ်ဘို ဖိလစ်ပိုင်သို့ ရောက်ရှိ
Feb 4, 2016 02:25:48 PM Content: နိုင်ငံတကာကုိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်အတွက်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ ကိုယ်စားလှယ်တော် ကာဒီနယ်ကြီးချားစ်ဘို ဖိလစ်ပိုင်သို့ ရောက်ရှိ
ဘုရားရှင်၏ဂရုဏာသနားခြင်းကို ကြေငြာရန် ဖိလစ်ပိုင်ဆရာတော်ကြီးများအားပုပ်ဖရန်စစ်မိန့် ကြား
Feb 4, 2016 02:24:49 PM Content: ဘုရားရှင်၏ဂရုဏာသနားခြင်းကို ကြေငြာရန် ဖိလစ်ပိုင်ဆရာတော်ကြီးများအားပုပ်ဖရန်စစ်မိန့် ကြား
ဘုရားရှင်၏ဂရုဏာသနားခြင်းကို ကြေငြာ ဘို့ပုပ်ဖရန်စစ် အရှင်သူမြတ်က ဖိလစ်ပိုင်ဆရာတော်ကြီးများအားမိန့် ကြား
၅၁ ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာ ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီးကို ဒီနေ့ စတင်ကျင်းပ တော့မည့် ဖြစ်ပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဆီဘူးမြို့ တော်တွင် စုရုံးရောက်ရှိနေ ကြ ကာ လတ်တလော ညီလာခံ ကျင်းပနေသည့် ဖိလစ်ပိုင်ဆရာတော်ကြီးများအား၊ အသစ်သောနည်းလမ်းရှာဖွေကာ ဘုရားရှင်၏သနားကြင်နာခြင်း ဘုန်းတန်ခိုးတော်ကို ကြေငြာ သက်သေခံကြပါဟု ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်က ဖိလစ်ပိုင်ဆရာတော်ကြီးများအားပေးပို့ ခဲ့သည့် ၄င်း၏စာချွန်တော်၌ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားရှင်၏ အဆုံးမရှိသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကို လူသားအားလုံးအတွက် အသင်းတော်ကြီး က ဖြန့် ဝေပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း
ယခုလို သနားကြင်နာခြင်းဂျူဗလီနှစ်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ဘ၀ထဲတွင် ဖခမည်းတော်ဘုရား၏ အကျိုး သက်ရောက်စွာဖြင့် ဆောင်ရွက်တော်မူသည့် လက္ခဏာ တို့ ကို အသေအချာ စူးစိုက်ကြည့် ရှုနိုင်ကြ ပါမည်အကြောင်းကျွုန်ုပ် ဆုတောင်းပါသည်ဟု အရှင်သူမြတ်ပုပ်ဖရန်စစ်က ဆိုပါသည်။ ၅၁ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီးသို့ ရောက်ရှိနေကြသည့် ဖိလစ်ပိုင် ဆရာ တော်ကြီးများ၏ လတ်တလော ညီလာခံ အစည်းအဝေးကို ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ ရက်၊ သောကြာနေ့ တွင် ဆီဘူးကာသီဒြယ် ကျောင်းတော်ကြီး၌ စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီး ဖွင့်ပွဲ မတိုင်မှီ ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ ရက် တနင်္ဂနွေ နေ့ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီ်းများ ၏ဆွေးနွေးချက်များတွင် လာမည့် မေလ ၉ ရက်၌ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သော ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်ရာအကြောင်းတို့ လည်း ပါဝင်သည် ဆိုခြင်းကို ဗာတီကန်ရေဒီယိုမှ သတင်းရရှိပါသည်။ Your browser does not support the audio element.
ဒုတိယမြောက်မော်နာကို ဘုရင် အဲလ်ဘတ်အား ပုပ်ဖရန်စစ် လက်ခံတွေ့ ဆုံ
Feb 4, 2016 02:22:58 PM Content: ဒုတိယမြောက်မော်နာကို ဘုရင် အဲလ်ဘတ်အား ပုပ်ဖရန်စစ် လက်ခံတွေ့ ဆုံ
သူတော်မြတ်၏ ဓါတ်တော် ခရက်ကောင်းသို့ သယ်ဆောင်မည်
Feb 4, 2016 02:20:11 PM Content: သူတော်မြတ် Blessed Pier Giorgio Frassati ၏ဓါတ်တော်ကို ခရက်ကောင်းသို့ သယ်ဆောင်မည်
၂၀၁၆ ခုနှစ်ပိုလန်နိုင်ငံခရက်ကောင်းမြို့ တော်တွင် ကျင်းပမည့် ကမ္ဘာ့လုငယ်များနေ့ သို့သူတော်မြတ် Blessed Pier Giorgio Frassati ၏ဓါတ်တော်ကို သယ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ သုတော်မြတ် Pier Giorgio သည် ၊ ၁၉၂၅ ခုနှစ် သက်တော် ၂၄ နှစ်တွင် ပျံလွန်တော်မူခဲ့ကာ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ် တွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဒုတိယမြောက် ယောဟန်ပေါလူးမှ သူတော်မြတ်အဆင့်သို့တင်မြှောက်ပေး ခဲ့ပါသည်။ အရှင်သူမြတ်ပုပ်ဖရန်စစ်က ၂၀၁၆ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ ၎င်း၏ မိန့် မြွက်စကားတွင် အထက်ပါသူတော်သူမြတ် အားပုံအတုယူနိုင်ရာများတို့ ကို ထည့်သွင်းမြွက်ကြားခဲ့ကြောင်း
သူတော်မြတ် Blessed Pier Giorgio Frassati သည် သနားကြင်နာခြင်းနှလုံးသားနှင့်ပြည့််ဝသူဖြစ်ကာ၊ နွမ်းပါးသူများကို မည်ကဲ့ သို့ သနားကြင်နာခြင်းပြသရမည်ကို သိသူဖြစ်ကြောင်း
ပစ္စည်းဥစ္စာပေးကမ်းခြင်းထက် ၄င်း၏ အချိန်၊ ၄င်း၏စွမ်းရည်နှင့် နွမ်းပါးသူတို့ အားနားထောင်ပေးခြင်း၊ သူတို့ ၏အကြာ၌ တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့် အစေခံခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း
သူတော်မြတ် Blessed Pier Giorgio Frassati သည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ သွန်သင်ချက်များကို လိုက်နာကာ ၄င်း၏ ပေးကမ်းမှုများကို လူသူမသိစေပဲ လျှို့ ဝှက်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းကို ဆို ရင်း အရှင်သူမြတ်ပုပ်ဖရန်စစ်က ဆက်လက်မြွက်ကြားခဲ့သည်မှာ။ သူတော်မြတ် Blessed Pier Giorgio Frassati ၏ ဈာပန အခမ်းအနားတွင် ၄င်း၏ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများကို အံ့အား သင့်စေသောအရာမှာ ဈာပန သို့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ အမြောက်အမြား လာ ရောက်ဂါရ ၀ပြုခြင်း ပင်ဖြစ်ကာ ၄င်း ဆင်းရဲသားများမှာ၊ လူငယ်အရွယ် သူတော်သူမြတ်၏ မိတ်ဆွေ အဖြစ်လက်ခံခြင်းကို ခံ ခဲ့ကြရ သူ များဖြစ်ပြီး အကူအညီ ရရှိခဲ့ကြသူများလည်း ဖြစ်ကြသည်ဟု အရှင်သူမြတ်ပုပ်ဖရန်စစ်က မြွက်ကြားခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့လူငယ်များနေ့ အတောအတွင်း သူတော်မြတ် Blessed Pier Giorgio Frassati ၏ ဓါတ်တော်မှာ ခရက်ကောင်းမြို့ တော်ရှိ ဒေါ်မိနိကန် ရသေ့များ၏ ဘုရားကျောင်းဖြစ်သော Holy Trinity Basilica ကျောင်းတော်ကြီးတွင် သယ်ဆောင်ထားရှိမည်ဖြစ်သည် ဆိုခြင်းကို ဗာတီကန် ရေဒီယို မှ သတင်းရရှိပါသည်။ Your browser does not support the audio element.
မျိုးစောင့်ဥပဒေနောက်ပိုင်း စီဘီစီအမ် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
Jan 14, 2016 01:20:27 AM Content: မျိုးစောင့်ဥပဒေနောက်ပိုင်း စီဘီစီအမ် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
ကမ္ဘာ့ရွှေ့ ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့်ခိုလှုရာရှာသူများနေ့ ကျင်းပမည်
Jan 14, 2016 01:19:16 AM Content: ကမ္ဘာ့ရွှေ့ ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့်ခိုလှုရာရှာသူများနေ့ ကျင်းပမည်
ကလေးငယ် ၂၆ ယောက်ပုပ်ဖရန်စစ်ဆေးကြောခြင်းမင်္ဂလာပေး
Jan 14, 2016 01:18:04 AM Content: ကလေးငယ် ၂၆ ယောက်ပုပ်ဖရန်စစ်ဆေးကြောခြင်းမင်္ဂလာပေး
Jan 14, 2016 01:17:01 AM Content: စိန်ဂျိူးဇက်သီလရှင်များ၏ငွေစင်ဂျူဗလီပွဲကျင်းပ
Jan 14, 2016 01:15:50 AM Content: ဘ၀ကိုခြစ်ကုတ်နေထိုင်ပြီးသာမညအခြေချခြင်းမပြုကြရန်ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
၀မ်းမြောက်ဖွယ်ချိ်န် ၀မ်းနည်းချိန် အားလုံး၌ဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်ကြပါစို့ ဟု ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Jan 14, 2016 01:14:48 AM Content: ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ချိ်န် ၀မ်းနည်းချိန် အားလုံး၌ဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်ကြပါစို့ ဟု ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
ပထမဆုံးသူငယ်တော်အိမ်မြင်ကွင်းနေရာ ဂရက်ရှီယိုသို့ ပုပ်ဖရန်စစ်အလည်အပတ်ကြွရောက်
Jan 14, 2016 01:13:30 AM Content: ပထမဆုံးသူငယ်တော်အိမ်မြင်ကွင်းနေရာ ဂရက်ရှီယိုသို့ ပုပ်ဖရန်စစ်အလည်အပတ်ကြွရောက်
Jan 14, 2016 01:12:06 AM Content: ပုပ်ဘေနဒစ်အတွက်မြူးစစ်ကွန်ဆက်ပွဲကျင်းပ
Jan 14, 2016 01:11:05 AM Content: မိသားစုအတွင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုသင်ယူနိုင်ကြကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Jan 14, 2016 01:09:53 AM Content: နိုင်ငံတကာရှားမိန်းဆုကြီးကိုပုပ်ဖရန်စစ်အားချီးမြှင့်
ဘုရားဖူး ပရိတ်သတ်ရှေ့ နွားစားခွက်အားပုပ်ဖရန်စစ်ကောင်းကြီးပေး
Jan 14, 2016 01:09:00 AM Content: ဘုရားဖူး ပရိတ်သတ်ရှေ့ နွားစားခွက်အားပုပ်ဖရန်စစ်ကောင်းကြီးပေး
ချစ်ခြင်းနှင့် ကြင်နာသနားတတ်ခြင်းက ဘာသာတရားအချင်းချင်းညီညွတ်စေမှု၏သော့ချက်
Jan 14, 2016 01:07:50 AM Content: ချစ်ခြင်းနှင့် ကြင်နာသနားတတ်ခြင်းက ဘာသာတရားအချင်းချင်းညီညွတ်စေမှု၏သော့ချက်
Jan 14, 2016 01:06:18 AM Content: အိန္ဒိယရေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ပုပ်ဖရန်စစ်ဆုတောင်း
ရန်ကုန်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးကာဒီနယ်ချားစ်ဘို ၏ ဆရာတော်ဝါ ငွေစင်ဂျူဗလီကျင်းပ
Jan 14, 2016 01:05:20 AM Content: ရန်ကုန်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးကာဒီနယ်ချားစ်ဘို ၏ ဆရာတော်ဝါ ငွေစင်ဂျူဗလီကျင်းပ
ပုပ်ဖရန်စစ် ၏ ဖေဖော်ဝါရီလ မက္ကဆီကိုခရီးစဉ်
Jan 14, 2016 01:03:43 AM Content: ပုပ်ဖရန်စစ် ၏ ဖေဖော်ဝါရီလ မက္ကဆီကိုခရီးစဉ်
စ်ိန်ဂျွန်လာထရန်မှ သန့် ရှင်းသောတံခါးတော်ဖွင့်လှစ်
Jan 14, 2016 01:02:09 AM Content: စ်ိန်ဂျွန်လာထရန်မှ သန့် ရှင်းသောတံခါးတော်ဖွင့်လှစ်
ပုပ်ဖရန်စစ်က သိရိလင်္ကာသမ္မတ အားလက်ခံတွေ့ ဆုံ
Jan 14, 2016 01:01:06 AM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်က သိရိလင်္ကာသမ္မတ အားလက်ခံတွေ့ ဆုံ
ရန်ကုန်စိန်မေရီဘုရားကျောင်း၌ သနားခြင်းဂျူဗလီနှစ် သန့် ရှင်းသောတံခါးဖွင့်လှစ်
Jan 14, 2016 01:00:06 AM Content: ရန်ကုန်စိန်မေရီဘုရားကျောင်း၌ သနားခြင်းဂျူဗလီနှစ် သန့် ရှင်းသောတံခါးဖွင့်လှစ်
သနားကြင်နာခြင်းက ပို၍လူသားဆန်သောကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆောက်ဘို့အကူအညီဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Jan 14, 2016 12:58:36 AM Content: သနားကြင်နာခြင်းက ပို၍လူသားဆန်သောကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆောက်ဘို့အကူအညီဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Jan 14, 2016 12:57:12 AM Content: သနားကြင်နားခြင်းဂျူဗလီနှစ်နှင့် သန့်ရှင်းသောတံခါးတော်ဖွင့်လှစ်
Jan 14, 2016 12:55:59 AM Content: သနားကြင်နာခြင်းဂျူဗလီနှစ်နှင့် အရေးကြီးသည့်ပြောင်းလည်းခြင်းအကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Jan 14, 2016 12:52:25 AM Content: မန္တလေးသာသနာ သစ္စာသုံးပါးခံသူတော်စင်များအစည်းအဝေးကျင်းပ
Jan 14, 2016 12:52:02 AM Content: အာဖရိက ခရီးစဉ်အကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ်ဝေငှမြွက်ကြား
ဗဟိုအာဖရိ ဘန်ဂီး၌ သနားကြင်နာခြင်းနှစ်အတွက်ဂျူဗလီတံခါးဖွင့်လှစ်
Jan 14, 2016 12:51:36 AM Content: ဗဟိုအာဖရိ ဘန်ဂီး၌ သနားကြင်နာခြင်းနှစ်အတွက်ဂျူဗလီတံခါးဖွင့်လှစ်
အာဖရိက ဗဟိုသမ္မတနိုင်ငံရှိဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုသို့ ပုပ်ဖရန်စစ်ကြွရောက်
Jan 14, 2016 12:51:02 AM Content: အာဖရိက ဗဟိုသမ္မတနိုင်ငံရှိဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုသို့ ပုပ်ဖရန်စစ်ကြွရောက်
Jan 14, 2016 12:50:40 AM Content: မသန်စွမ်းသူများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများနေထိုင်ရာသို့ ပုပ်ဖရန်စစ်ကြွရောက်
သခင်ယေဇူး၏ ကူညီဆောင်မမှုဖြင့် နံရံတံတိုင်းပင်လျှင် အသစ်သော မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းအသွင်ပြောင်းနိုင်ကြောင်း ယူဂန်ဒါလူငယ်များအားပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Jan 14, 2016 12:50:18 AM Content: သခင်ယေဇူး၏ ကူညီဆောင်မမှုဖြင့် နံရံတံတိုင်းပင်လျှင် အသစ်သော မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းအသွင်ပြောင်းနိုင်ကြောင်း ယူဂန်ဒါလူငယ်များအားပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
လူ့ ဘောင်အဖွဲ့ အစည်း၏ကျန်းမာရေးသည် မိသားစုအပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်း ကင်ညာတွင် ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Jan 14, 2016 12:49:49 AM Content: လူ့ ဘောင်အဖွဲ့ အစည်း၏ကျန်းမာရေးသည် မိသားစုအပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်း ကင်ညာတွင် ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
ပုပ်ဖရန်စစ် ကင်ညာနှင့် ယူဂန်ဒါသို့ ဗီဒီယိုသတင်းစကားပေးပို့ 
Jan 14, 2016 12:49:29 AM Content: ပုပ်ဖရန်စစ် ကင်ညာနှင့် ယူဂန်ဒါသို့ ဗီဒီယိုသတင်းစကားပေးပို့ 
မန္တလေးမြို့ စိန်ဇေးဗီးယား ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းတွင် ဘာသာပေါင်းစုံလူငယ်များနှီးနှောဖလှယ်
Jan 14, 2016 12:49:05 AM Content: မန္တလေးမြို့ စိန်ဇေးဗီးယား ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းတွင် ဘာသာပေါင်းစုံလူငယ်များနှီးနှောဖလှယ်
ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ဒီဇင်ဘာလ အတွက် ဆုတောင်းရန်ထားရှိသောရည်ရွယ်ချက်
Jan 14, 2016 12:48:38 AM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ဒီဇင်ဘာလ အတွက် ဆုတောင်းရန်ထားရှိသောရည်ရွယ်ချက်
၇န်ကုန်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ကာဒီနယ်ချားစ်ဘို၏ ခရစ္စမတ်မင်္ဂလာ သတင်းစကား
Dec 24, 2015 11:37:08 PM Content: ၇န်ကုန်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ကာဒီနယ်ချားစ်ဘို၏ ခရစ္စမတ်မင်္ဂလာ သတင်းစကား
ယေဇူးဘုရင်ပွဲတော်နေ့ ကြီး၌ပုပ်ဖရန်စစ် အန်ဂျေလူးမေတ္တာဦးဆောင်ရွတ်ဆို
Nov 23, 2015 05:50:26 PM Content: ယေဇူးဘုရင်ပွဲတော်နေ့ ကြီး၌ပုပ်ဖရန်စစ် အန်ဂျေလူးမေတ္တာဦးဆောင်ရွတ်ဆို
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ အာဖရိက ခရီးစဉ်
Nov 23, 2015 05:48:58 PM Content: ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ အာဖရိက ခရီးစဉ်
စိန်ဂျွန်လာထရန်ဘာဆီးလီးကားရှိ သန့် ရှင်းသောတံခါးကို မွမ်းမံ
Nov 23, 2015 05:47:43 PM Content: စိန်ဂျွန်လာထရန်ဘာဆီးလီးကားရှိ သန့် ရှင်းသောတံခါးကို မွမ်းမံ
သနားကြင်နာခြင်းဂျူဗလီနှစ်အတွက် စိန်ပီတာ ဘာဆီးလီးကားရှိ သန့် ရှင်းသောတံခါးတော် ဖော်ပြ
Nov 23, 2015 05:46:08 PM Content: သနားကြင်နာခြင်းဂျူဗလီနှစ်အတွက် စိန်ပီတာ ဘာဆီးလီးကားရှိ သန့် ရှင်းသောတံခါးတော် ဖော်ပြ
Nov 18, 2015 11:00:08 AM Content: အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကိုရှုတ်ချကြောင်းပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Nov 18, 2015 10:58:26 AM Content: ဘုရားမဲ့လူသားဝါဒသည်ခရစ်ယာန်အမှတ်လက္ခဏာကိုဖျက်ဆီးကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Nov 18, 2015 10:41:55 AM Content: မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုဘေးချိတ်ထားပြီးအချင်းချင်းစကားစမြည်ပြောဆိုကြပါဟု
Nov 18, 2015 10:40:15 AM Content: အာဗီအေ အသံလွှင့်ဌာန၏အထွေထွေညီလာခံကြီးကျင်းပခြင်း
၃၂ ကြိမ်မြောက် သာမန်တနင်္ဂနွေနေ့
Nov 7, 2015 03:49:09 PM Content: သူမမူကား အလွန်ဆင်းရဲလျက်ပင် မိမိ၏၀မ်းစာအတွက် ရှိသမျှကိုထည့်ဝင်လေပြီ။
မိသားစုသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်း၏မူလနေရာဖြစ်ရန်အရေးကြီးကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ် မြွက်ကြား
Nov 6, 2015 03:51:58 PM Content: မိသားစုသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်း၏မူလနေရာဖြစ်ရန်အရေးကြီးကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ် မြွက်ကြား
Nov 4, 2015 03:48:40 PM Content: ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ် ရဟန်းမင်းကြီးများ၏အုတ်ဂူ၌ဆုတောင်းမေတ္တာပြုခြင်း
ပုပ်ဖရန်စစ်သည် ရဟန္တာပေါင်းပွဲနေ့ အတွက်မစ္ဆားတရားတော်ကို ဗီရားနိူသဂြိုင်းတော်၌ကျင်းပ
Nov 4, 2015 03:48:16 PM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်သည် ရဟန္တာပေါင်းပွဲနေ့ အတွက်မစ္ဆားတရားတော်ကို ဗီရားနိူသဂြိုင်းတော်၌ကျင်းပ
Nov 4, 2015 03:47:49 PM Content: မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှ ချမ်းသာကုန်းစိတ်ပုတီးမယ်တော်ပွဲကျင်းပ
Nov 4, 2015 03:47:24 PM Content: နိုင်ငံတကာကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီးကျင်းပရန်အိမ်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်ပြင်ဆင်
ဖခမည်းတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် ပထမဆုံးအတူရှိသူဖြစ်ကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Nov 4, 2015 03:46:52 PM Content: ဖခမည်းတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် ပထမဆုံးအတူရှိသူဖြစ်ကြောင်းပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
ခရစ်ယာန်များသည် ယုံကြည်ခြင်း၌ခိုင်မြဲ၍ပြောင်းလည်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပုပ်ဖရန်စစ် မြွက်ကြား
Oct 27, 2015 10:30:30 AM Content: ခရစ်ယာန်များသည် ယုံကြည်ခြင်း၌ခိုင်မြဲ၍ပြောင်းလည်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပုပ်ဖရန်စစ် မြွက်ကြား
ပုပ်ဖရန်စစ် အရှင်သူမြတ်မှ ကာဒီနယ်ကြီးချားစ်ဘိုအား နိုင်ငံတကာ ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီးအတွက် ကိုယ်စားလှယ်တော်အဖြစ်ခန့် အပ်ကြေငြာ
Oct 27, 2015 10:30:02 AM Content: ပုပ်ဖရန်စစ် အရှင်သူမြတ်မှ ကာဒီနယ်ကြီးချားစ်ဘိုအား နိုင်ငံတကာ ကိုယ်တော်မြတ်ပွဲတော်ကြီးအတွက် ကိုယ်စားလှယ်တော်အဖြစ်ခန့် အပ်ကြေငြာ
Oct 27, 2015 10:29:32 AM Content: မန္တလေးသာသနာ နာရေးသတင်း
ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်မှ ရဟန္တာအသစ် ၄ ပါး တင်မြှောက်
Oct 27, 2015 10:29:02 AM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်မှ ရဟန္တာအသစ် ၄ ပါး တင်မြှောက်
Oct 13, 2015 03:36:51 PM Content: ကြွယ်ဝမှုကိုဖက်တွယ်ထားသူသည်၊ မိမိ၏ယုံကြည်ခြင်း၌တည်မနေနိုင်ဟုပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
၂၀၁၆ အာဗီအေမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်သောတရှင်တွေ့ ဆုံပွဲနေ့ ရက် Oct 13, 2015 01:58:32 PM Content: ၂၀၁၆ အာဗီအေမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်သောတရှင်တွေ့ ဆုံပွဲနေ့ ရက် Your browser does not support the audio element.
လူထုဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကက်သလစ် စတူရီယိုကြီးတစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်
Oct 13, 2015 01:57:48 PM Content: လူထုဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကက်သလစ် စတူရီယိုကြီးတစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်
ရန်ကုန်ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ နာရေးသတင်း
Oct 13, 2015 01:57:16 PM Content: ရန်ကုန်ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ နာရေးသတင်း
တံခါးပေါက်များပိတ်ထားတဲ့အသင်းတော်ဟာ သူ့ မကိုသူမ သစ္စာဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Oct 13, 2015 01:56:47 PM Content: တံခါးပေါက်များပိတ်ထားတဲ့အသင်းတော်ဟာ သူ့ မကိုသူမ သစ္စာဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
ဟားခါးကက်သလစ် သာသနာ နာရေးသတင်း
Oct 13, 2015 01:56:19 PM Content: ဟားခါးကက်သလစ် သာသနာ နာရေးသတင်း
ပုပ်ဖရန်စစ်သည် ကျွန်နော်တို့ ၏ ဆရာတော်ကြီးဖြစ်သည်ဟု ရောမလူသရန် ခေါင်းဆောင်ကြီးမှ ပြောကြား
Oct 5, 2015 04:25:48 PM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်သည် ကျွန်နော်တို့ ၏ ဆရာတော်ကြီးဖြစ်သည်ဟု ရောမလူသရန် ခေါင်းဆောင်ကြီးမှ ပြောကြား
လာမည့် နိူဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ တွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်သည် ရောမမြို့ ရှိ လူသရန် ဘုရားကျောင်းတော်သို့ အလည်အပတ်ကြွရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါဘုရားကျောင်းတော်သို့ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ရဟန္တာဂျွန်ပေါလ် ၂ ကြွရောက်ခဲ့ကာ၊ အနားယူသွားပြီဖြစ်သော ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ၁၆ ဆက်မြောက်ဘယ်နဒစ်အရှင်သူမြတ်ကတော့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အသီးသီး ကြွရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါသည်။
ရောမမြို့ တော်မှာရှိကြတဲ့ ကျွန်နော်တို့ လူသရန်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအတွက်၊ ပုပ်ဖရန်စစ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်အနေနဲ့ မဟုတ်ပေမဲ့ အမှတ်သင်္ကေတ သဘောသဘာဝ အရဖြစ်ပါတယ့် ဧ၀ံဂေလိသတင်းကောင်းကြေငြာဘို ၊ ဘုရားရှင်နဲ့ပိုမိုဆက်နွယ်မှုရှိဘို့ အတွက်၊ အခုချိန်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ တွေတူညီတဲ့ ဆက်ကပ်မှုတွေနဲ အသစ်သောနည်းလမ်းများအားဖြင့် လူသားများကို ကူညီပေးသွားကြရမည်ဖြစ်သည်ဟု လူသရန် အသင်းတော်၏ ခေါင်းဆောင်ပါစတာ Jens-Martin Kruse က အီတလျံသတင်းအေဂျင်စီ SIR သို့ပြောကြားခဲ့သည်ကို Catholic World News, CWN Your browser does not support the audio element.
ကျွန်ုပ်တို့ က တံတိုင်းများကိုတည်ဆောက်သည့်အခါ၊ ဘုရားရှင်သည်ပေါင်းကူးတံတားများကိုတည်ဆောက်သည်ဟု ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Oct 5, 2015 10:54:17 AM Content: ကျွန်ုပ်တို့ က တံတိုင်းများကိုတည်ဆောက်သည့်အခါ၊ ဘုရားရှင်သည်ပေါင်းကူးတံတားများကိုတည်ဆောက်သည်ဟု ပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Oct 4, 2015 01:26:14 PM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ အောက်တိုဘာလအတွက်ဆုတောင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်
နှစ်၏ ၂၇ ကြိမ်မြောက်သာမာန်တနင်္ဂနွေနေ့ သြ၀ါဒ
Oct 4, 2015 01:25:08 PM Content: နှစ်၏ ၂၇ ကြိမ်မြောက်သာမာန်တနင်္ဂနွေနေ့ သြ၀ါဒ
Sep 29, 2015 10:59:27 AM Content: ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်အမေရိကားသို့ ရောက်ရှိ
နေရာရွှေ့ ပြောင်းလုပ်ကိုင်သူများ၏ တနင်္ဂနွေနေ့ ကို စင်ကာပူဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ၌ကျင်းပ
Sep 29, 2015 10:58:24 AM Content: နေရာရွှေ့ ပြောင်းလုပ်ကိုင်သူများ၏ တနင်္ဂနွေနေ့ ကို စင်ကာပူဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ၌ကျင်းပ
ကမ္ဘာကြီးပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်သင်တို့ ပြုလုပ်ကြရမည်ဟု ဟာဘားနာ၌ လူငယ်များအားပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Sep 29, 2015 10:55:27 AM Content: ကမ္ဘာကြီးပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်သင်တို့ ပြုလုပ်ကြရမည်ဟု ဟာဘားနာ၌ လူငယ်များအားပုပ်ဖရန်စစ်မြွက်ကြား
Sep 29, 2015 10:54:55 AM Content: ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ကျုးဘားခရီးစဉ်
၂၀၁၅ ခုနှစ် မြန်မာပြည် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာ
Sep 21, 2015 11:28:38 AM Content: ၂၀၁၅ ခုနှစ် မြန်မာပြည် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာ
၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ် ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ ချုပ်မှနှိုးဆော်ချက်
Sep 21, 2015 11:27:39 AM Content: ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်
Sep 21, 2015 11:25:06 AM Content: ကျူးဘားမှ အကျဉ်းသားများလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်း
သန့် ရှင်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာတံခါးကို ပုပ်ဖရန်စစ် သည် ကာရီတာစ့်ဘော်ဒါတွင်ဖွင့်လှစ်မည်
Sep 21, 2015 11:23:30 AM Content: သန့် ရှင်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာတံခါးကို ပုပ်ဖရန်စစ် သည် ကာရီတာစ့်ဘော်ဒါတွင်ဖွင့်လှစ်မည်
၂၀၁၅ ခုနိုဝင်ဘာလ အထိ အရှင်သူမြတ်ပုပ်ဖရန်စစ်၏ အချိန်ဇယား
Sep 21, 2015 11:22:18 AM Content: ၂၀၁၅ ခုနိုဝင်ဘာလ အထိ အရှင်သူမြတ်ပုပ်ဖရန်စစ်၏ အချိန်ဇယား
ဒုတိယမြောက် ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်ပေါလ် ကျူးဘားသို့ ကြွရောက်ခဲ့
Sep 21, 2015 11:21:11 AM Content: ဒုတိယမြောက် ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်ပေါလ် ကျူးဘားသို့ ကြွရောက်ခဲ့
မန္တလေးအာဗီအေ မေတ္တာအားမာန်ကလပ် ချမ်းသာကုန်း၌အစည်းအဝေးကျင်းပ
Sep 21, 2015 11:19:20 AM Content: မန္တလေးအာဗီအေ မေတ္တာအားမာန်ကလပ် ချမ်းသာကုန်း၌အစည်းအဝေးကျင်းပ
ပုပ်ဖရန်စစ်သည် ကူဝိတ် ၀န်ကြီးချုပ်အားလက်ခံတွေ့ ဆုံခြင်း
Sep 21, 2015 11:17:49 AM Content: ပုပ်ဖရန်စစ်သည် ကူဝိတ် ၀န်ကြီးချုပ်အားလက်ခံတွေ့ ဆုံခြင်း
ဒုက္ခသည်များအားလက်ခံကြိုဆိုခြင်းမရှိသော သာသနာတိုက်နယ်များကို ပြတိုက်ဟုခေါ်သင့်
Sep 11, 2015 10:42:20 AM Content: ဒုက္ခသည်များအားလက်ခံကြိုဆိုခြင်းမရှိသော သာသနာတိုက်နယ်များကို ပြတိုက်ဟုခေါ်သင့်
၁၆ဆက်မြောက်ပုပ်ဘေနဒစ်သည် ရွှေ့ ပြောင်းနေထိုင်သူဒုက္ခသည်များအတွက်ဆုတောင်းပေးနေခြင်း
Sep 10, 2015 03:50:40 PM Content: ၁၆ဆက်မြောက်ပုပ်ဘေနဒစ်သည် ရွှေ့ ပြောင်းနေထိုင်သူဒုက္ခသည်များအတွက်ဆုတောင်းပေးနေခြင်း
Sep 10, 2015 03:48:58 PM Content: ပေါ်တူဂီမှဆရာတော်ကြီးများအားပုပ်ဖရန်စစ်လက်ခံတွေ့ ဆုံခြင်း